Zayar : 2014
အတွက် ဖေဘုတ်မြန်မာ ဆော့ဝဲလေးပါ
ဘဲ facebook မှာ ကိုယ်သိချင်တဲ့
နေရာတွေကို ရှောက် ကလိလို့ရတာပေါ့……
Posted by zayar htut at Tuesday, May 13, 2014 No comments: Links to this post
ဖုန်းခေါ်မယ် မက်ဆေ့ ပို့မယ် အင်တာနတ် မလို ဖုန်းပိုက်ဆံ မကုန်ဘဲ
ဖုန်းခေါ်မယ် မက်ဆေ့ ပို့မယ် အင်တာနတ်
မလို ဖုန်းပိုက်ဆံ မကုန်ဘဲ
ကောင်းပါတယ် ဖုန်းပိုက်ဆံလည်း မကုန်
မက်ေဆ့ ပိုနိုင်တယ် ဒီဆော့ဝဲလေးကို
နှစ်ဦးနှစ်ဖတ်လုံးမှာရှိထားရပါမယ် Zapya နဲ
တူတူပါဘဲ Zapya သုံးတတ်ရင် လွယ်ပါတယ်
နှစ်ဦးနှစ်ဖတ် Wi-Fi Hotspot ရယူရမှာဖြစ်
ပါတယ် ဖုန်းအများကြီးနဲလည်း ချိတ်ဆက်
မက်ဆေ့ ပို့ ဖုန်းပြောနိုင်ပါတယ်
ဆော့ဝဲထဲ မှာ Wi-Fi Hotspot ဆိုတာရှိပါ
တယ် Wi-Fi Hotspot နဲ ချိတ်ဆက်ပြီး
ဖုန်းတွေ အများကြီးနဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
လျင်မြန်မူရှိပါတယ် ဆော့ဝဲထဲကနေ အသုံး
ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ ဘဲဖြစ်ဖြစ်
ပို့နိုငိပါတယ် Wi-Fi ရရှိတဲ့ အကွာအဝေးလောက်
ကွန်းမန့်လေး တစ်ရွက်က ကျွန်တော်
မေမိုးတစ်ယောက် မောပန်းနွမ်းလျခြင်း၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၊ မကျေနပ်ခြင်းများစွာတို့ဖြင့် ဝတ်စားထားသော အဝတ်များကိုပင်မလဲနိုင်တော့ပဲ အိပ်ယာပေါ် သို့လှဲချလိုက်ပါတယ်။မျက်ရည်တစ်ချို့က ပါးပြင်ပေါ်ကို အလိုလိုစီးဆင်းကျလာတာမို့ သုတ်တောင်မသုတ်တော့ပဲ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ခေါင်းအုံးပေါ်ကို မျက်နှာအပ်လိုက်ကာ ငိုချလိုက်ပါတော့တယ်။အကြောင်းကတော့…..
ဒီနေ့ သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသော အစ်မဖြစ်သူ မေစိုးတစ်ရောက် သူ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လို့ အိမ်ထောင်ပြုတာမှန်ပေမယ့် သူ့ထက်ငါးနှစ်လောက်ကြီးပြီး အရာရာကို လိမ္မာရေး ခြားရှိအောင် မိဘလိုသွန်သင်ခဲ့တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ကိုတော့ မေမိုးဒီနေ့ကစလို့ ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီ။
ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အခုမေမိုး ဆယ်တန်းရောက်တဲ့အထိ ညီအစ်မနှစ်ယောက်တခန်းထဲ အတူ တူအိပ်နေလာခဲ့ကြတာ။ဒီညကစလို့ သူတို့ညီအစ်မအိပ်တဲ့အခန်းလေးကိုပါပေးလိုက်ရတာမို့ မေမိုးတစ်ယောက် ခြေရင်းဖက်ကအခန်းကိုပြောင်းပေးလိုက်ရပြီး တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်စွာ ဖြတ်သန်းရတော့မှာကြောင့် အားငယ်စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။
မမကတော့ သူ့ချစ်သူရင်ခွင်မှာ ပျော်နေရချိန်တွေမှာ မေမိုးကတော့ တစ်ယောက်တည်း ဖြတ်သန်းရ တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်လည်း မေမိုးရင်ခွင်ထဲကနေ မမကိုဆွဲထုတ်သွားတဲ့ မမချစ်သူ ကိုသက်ကို မေမိုး စိတ်ထဲက အလိုလိုမုန်းတီးနေမိပါတယ်။အစ်မနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစ်ကိုတော်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် မေမိုးတစ်ယောက် အမုန်းတရားတွေကြောင့် အစ်ကိုတစ်ယောက်လို ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။
မမတို့က ဘယ်လောက်တောင်ပိရိကြသလဲဆိုရင် မေမိုးတစ်စွန်းတစ်စလောက်တောင်မရိပ်မိလိုက်ပါ ဘူး။တက္ကသိုလ်မှာကတည်းက ချစ်သူတွေဖြစ်လာကြပြီး ဘွဲ့ရတော့မှ လူကြီးစုံရာနဲ့လာရောက်တောင်းရမ်း ကာ ကမန်းကတန်း လက်ထပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မမတို့ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန် မေမိုးတစ်ယောက် မမရင်ခွင်ထဲမျက်နှာအပ်ကာ ငိုကြွေးခဲ့ရပါတယ်။မမကိုတော့ အားနာပါတယ်။သူ့ချစ်သူနဲ့ ပေါင်းရမှာမို့ ပျော်နေတဲ့အချိန် မေမိုးကြောင့် သူတို့အပျော်တွေ အပြည့်အဝမပျော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အားရအောင်ငိုပြီးတဲ့နောက် မေမိုးအဝတ်အစားလဲကာ အခန်းပြင်ထွက်လာတော့ သူတို့လင်မယား ခန်းမကနေပြန်လာကြပါတယ်။အပေါင်းအသင်းတွေ တရုန်းရုန်း စကြ နောက်ကြနဲ့မမတစ်ယောက် ခေါင်းလေးတောင်မဖော်နိုင်လောက်အောင် ရှက်နေတုန်း သူကတော့အောင်ပွဲခံတဲ့မျက်နှာနဲ့ အားလုံးကို နှုတ်ဆက် ပြီးနောက် သူတို့မင်္ဂလာအခန်းထဲကို မမခါးလေးကိုဖက်ကာဝင်သွားကြတာကို မေမိုးတစ်ယောက် ဆွေးမြည့်စွာ ကြည့်လိုက်ကာ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချလို့ အခန်းထဲဝင်လိုက်ပါတယ်။
နောက်တော့ ကိုယ့်ဖာသာအားတင်းကာ စာကျက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကောက်ကိုင်လိုက်ကာ စာကျက်နေလိုက်ပါတယ်။စိတ်ထဲကသာ တိုးတိုးလေးကျက်နေတာ စာထဲလဲစိတ်က သိပ်တော့မရောက်ပါဘူး။စိတ်မကောင်းစရာ အကြောင်းတွေကိုပဲပြန်တွေးမိနေတော့ မကြာမကြာ စာအုပ်ကို ကိုင်ထားရင်း ငိုင်နေမိတာကများတယ်။ဒီအချိန်မှာ
တစ်ဖက်ခန်းက တခစ်ခစ်အသံတွေကြားလိုက်ရတော့ စာအုပ်လေးကိုရင်ဘတ်ပေါ်ကိုတင်လိုက်ရင်း မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့ ခေါင်းလေးမသိမသာ စောင်းလိုက်ကာ တစ်ဖက်ခန်းကအသံကို နားစွင့်နေလိုက်မိပါတယ်။
‘ဟိတ်..ကို..မလုပ်ပါနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ ဘုန်းတွေနိမ့်တော့မှာပဲ’
ဘာလဲဟ ဘုန်းတွေနိမ့်တော့မှာပဲဆိုတာ ဟိုလူကဘာတွေများ မမကိုလုပ်နေလို့လဲ၊စူးစမ်းချင်စိတ်တွေ နဲ့ အခန်းနံရံ ဖိုင်ဘာပြားကိုနားကပ်ကာ နားထောင်နေမိလိုက်တယ်။
‘အို..ကိုကလည်း အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ..ဟင့်..ဟင့်..ရှီး..’ အသံကတော့ တော်တော်လေးကိုတိုးပေမယ့် မေမိုးကတော့ သေချာနားထောင်နေတာမို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို ကြားနေရပါတယ်။ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်လို့ မမတစ်ယောက်ဒီလိုအသံတွေထွက်နေရတာလဲ။ဒိုင်းခနဲ ရင်ခုန်သံနဲ့အတူ ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတာကိုလည်း သိလို မြင်လိုနေပါပြီ။အပျိုဖော်ဝင်စအရွယ် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်နဲ့ ကာမကိစ္စတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာတတ်တဲ့ အရွယ်ဆိုတော့လည်း ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိပ်ကိုသိချင်နေပါတယ်။
မေမိုးတစ်ယောက်သိချင်စိတ်တွေများလာလို့ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာ ဘေးဘီကိုလေ့လာလိုက် တော့ အခန်းနံရံအပေါ်ဆုံးမှာ ခြင်ဇကာရိုက်ထားပေမယ့် အလုံတော့မဟုတ်ဘူး။ဘီတင်ပြားလေးတွေနဲ့သာ ရိုက်ထားတာမို့ အဲဒီကနေဆိုတွေ့ရလောက်တယ်။ဒါပေမယ့် နည်းနည်းမြင့်နေတော့ ခဏတော့စဥ်းစားလိုက် တယ်။အော် ဒါများလွယ်လွယ်လေးပဲ။ကုလားထိုင်ကို စာကြည့်စားပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြီး အဲဒီအပေါ်ကိုတက် ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရပြီပေါ့။
ဒါကြောင့်မေမိုးလည်း အချိန်မဆိုင်းပဲ ခုတင်ပေါ်ကနေအသာလေးဆင်းလာကာ ကုလားထိုင်ကို စားပွဲပေါ်ကို အသာလေးအသံမထွက်အောင်တင်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်ခန်းကအတွဲက မသိနိုင်ပေမယ့် မဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့ မေမိုးကတော့ တစ်သက်လုံးတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ တော်တော်လေးကိုသတိ ထားကာ လုပ်နေရပါတယ်။တစ်ဖက်ခန်းမှာ မီးလင်းနေတော့ ငါ့မျက်နှာကြီးများ တွေ့သွားမလားလို့တောင် မဆီမဆိုင်တွေးပူနေသေးတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ့်အခန်းကမီးခလုတ်ကို အရင်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
နောက်တော့ ခုတင်ပေါ်ကိုပြန်တက် ခုတင်ပေါ်ကနေ စားပွဲပေါ်ကို အသံမမြည်အောင်တက်လိုက်ရင်း နံရံကို အသာလေးထိန်းကိုင်ကာ ကုလားထိုင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်။ဒူးတွေတောင်တဆတ်ဆတ်တုန်လာ ပါတယ်။အခုနေများ ဟိုဖက်ခန်းကသိသွားရင် မနက်ရောက်လို့ မျက်နှာဘယ်လိုထားရမှန်းတောင်မသိပါဘူး။
အသာလေးအားတင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ မေမိုးတစ်ယောက် ပါးစပ်အဟောင်းသားလေးဖြစ်သွားပါ တယ်။အခန်းထဲမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့….
မေမိုးအစ်မ မေစိုးတစ်ယောက်ခုတင်ပေါ်မှာ အဝတ်အစားမဲ့လို့ပက်လက်လေးလန်နေပါတယ်။ သူ့ယောင်္ကျားကတော့ မမစိုးပေါင်ကြားထဲခေါင်းဝင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ရေးတေးတေးတော့သဘောပေါက်စပြုလာပါတယ်။
မမစိုးကိုကြည့်လိုက်တော့ ပေါင်လေးနှစ်လုံးကိုကားပေးထားရင်း လက်နှစ်ဖက်ကသူ့ယောင်္ကျားခေါင်း ကိုစုံကိုင်ထားကာ ပါးစပ်လေးဟလို့ အသက်ကိုတောင်မနည်းလုကာရှူနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ချက် တစ်ချက်ခါးလေးကိုလည်း ကော့ကာ ကော့ကာပေးနေတာမို့သူလည်း ခံစားမှုတွေအထွတ်အထိပ်ရောက်နေ တယ်ဆိုတာလည်း ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
အစပိုင်းတော့ ချောင်းပြီးအသာလေးပြန်ဆင်းတော့မလို့ပါပဲ။ဒါပေမယ့်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ဘယ်လိုမှမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာမို့ မေမိုးတစ်ယောက်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဆက် ကြည့်နေပါတယ်။ရင်တွေကလည်းတဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေကာ အာခေါင်တွေပါခြောက်လာပါတယ်။ဒူးတွေပါတဆတ် ဆတ်တုန်လာတာမို့ ပြုတ်မကျသွားအောင် မနည်းကိုထိန်းထားရပါတယ်။
ကြည့်နေရင်းပဲ မမစိုးတစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ်ကနေခါးလေးကြွတက်လာကာ သူ့လင်တော်မောင် ခေါင်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်ထားလိုက်ရင်း ခါးလေးကအိပ်ယာပေါ်ကိုပြန်ပြုတ်ကျသွားတာကို တွေ့လိုက်ရ ပါတယ်။နောက်တော့ သူ့ယောင်္ကျား ကိုသက်ရဲ့ခေါင်းကို အတင်းဆွဲကာ ကိုသက်နှုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရ နမ်းရှိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
နောက်တော့ ကိုသက်လည်းလုံခြည်ကိုဆွဲချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ငေါက်ခနဲထွက်လာတဲ့ ကိုသက်ရဲ့လီး ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ မေမိုးရင်ထဲရှိန်းခနဲဖြစ်သွားပါတယ်။မေမိုးလည်း ဆက်ကြည့်နေတုန်း ကိုသက်က မမစိုးပေါင်ကြားထဲဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း သူ့လီးကြီးနဲ့ မမစိုးအဝလေးကိုတေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းလေးသွင်းလိုက်ပါတယ်
‘အ…ကို…ဖြည်းဖြည်း’ လို့ပြောလိုက်ကာ မမစိုးတစ်ယောက် ပါးစပ်လေးဟပြီးခေါင်းလေးပါမော့သွား ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုသက်ဟာကြီးက မမစိုးအပေါက်ထဲကိုဝင်သွားတော့ မမစိုးတစ်ယောက် ကိုသက် ရင်ဘတ်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့တွန်းထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။မေမိုးတစ်ယောက် ကြည့်နေရင်းနဲ့ မမစိုးနေ ရာမှာ ငါသာဆိုရင် ဒီလောက်ကြီးတဲ့ဟာကြီးနဲ့ဆို ငါ့ဟာလေးတော့ကွဲသွားမှာပဲ ဆန့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုကာ လက်ကဘောင်းဘီပေါ်ကို အလိုလိုရောက်သွားပါတယ်။
အို… ငါ့ဟာလေးလည်း စိုရွှဲနေပါလား။သေးတွေများထွက်ကျကုန်ပြီလားမသိဘူး။
မေမိုးလည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုစိတ်ထဲကနေရေရွတ်လိုက်ပြီး နည်းနည်းလေးပွတ်လိုက်မိတော့ တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသေးတဲ့ အရသာထူးတစ်ခုကိုစတင်ခံစားမိလိုက်ရပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်း မမစိုးနေရာကိုဝင်ကာ ကိုယ်တိုင်အလိုးခံချင်တဲ့စိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
တစ်ဖက်ခန်းက ကိုသက်တို့ကလည်းတော်တော်လေးကို အရှိန်ရနေပါပြီ။မမစိုးအထဲကို ကိုသက်ဟာကြီး တစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားပြီး ကိုသက်ခါးလေးလည်းတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာပါတယ်။မမစိုးက လည်း ကိုသက်ခါးကိုဖက်ထားရင်း အောက်ကနေတစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်ကော့ပေးနေတာကိုလည်း တွေ့နေရပါ တယ်။ကိုသက်တစ်ယောက်လည်း အောက်ပိုင်းကလှုပ်ရှားနေသလို အပေါ်ကလည်း မမစိုးနှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်ပေးလိုက် မမစိုးနို့တွေကို စို့ပေးလိုက်နဲ့ အလုပ်တွေကိုရှုပ်နေပါတယ်။
မေမိုးလည်း ဘောင်းဘီပေါ်ကလက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်လာပါတယ်။လက်ကိုမရပ်ခြင်လောက် အောင် ရှိန်းခနဲ ရှိန်းခနဲ အရသာတွေ့နေပါတယ်။ကိုသက်တို့လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြန်လာပြီး နောက်ဆုံးတော့ ကိုသက်တစ်ယောက် တွန့်ခနဲဖြစ်သွားကာ မမစိုးကိုယ်ပေါ်ကိုမှောက်ကျသွားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
မေမိုးလည်း သတိကိုမနည်းထားပြီးခုံပေါ်ကနေ ခုတင်ပေါ်ပြန်ရောက်အောင် ကြိုးစားပြီးဆင်းလိုက်ရပါ တယ်။ခုတင်ပေါ်ရောက်တော့ ပက်လက်လေးလှန်ကာ ခရီးဝေးကိုပြေးသွားခဲ့ရသလို အလွန်မောပန်းနွမ်းနယ် နေပါတယ်။ရင်အစုံကလည်းနိမ့်ခြည် မြင့်ခြည်နဲ့ စောစောကမြင်ကွင်းကို မျက်စေ့ထဲကနေဖျောက်လို့မရပါဘူး။
မမစိုးနေရာမှာ ငါသာဆိုရင်ဆိုတဲ့ အသိတွေနဲ့စိတ်ကူးလိုက်ရင်း မမစိုးနို့ကို ကိုသက်စို့ပေးနေတာကို မျက်စိထဲမြင်ယောင်ရင်း ငါ့ကိုသာစို့ပေးရင်တော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး လို့တွေးကာ လက်ကအလိုလိုနို့အုံ ပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။နို့သီးခေါင်းလေးက ထောင်နေတာကြောင့် အသာပွတ်ပေးနေတုန်း အရသာတွေ့လာ ပါတယ်။နောက်တော့ လက်တစ်ဖက်က စောက်ပတ်လေးပေါ်ကို ရောက်သွားကာ စောစောကလိုပွတ်ပေးနေ ရင်း စိတ်ကူးထဲမှာ ကိုသက်လီးကြီးနဲ့မမစိုးစောက်ပတ်ထဲကို ဝင်နေတာကိုပြန်ခံစားမိရင်း အကွဲကြောင်းလေး ထဲကို လက်ခလယ်လေးနဲ့ မရဲတရဲ အသာလေးထိုးသွင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။
စောစောကထွက်ထားတဲ့ အရည်တွေကြောင့်ရော စိတ်ကူးနဲ့ဖီးတက်နေတဲ့အရှိန်ကြောင့်ရော စောက်ပတ်လေးတစ်ခုလုံးစိုရွှဲနေတာကြောင့် နည်းနည်းလေးအထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။
အိုး..အရမ်းကောင်းတာပဲ ဒီလိုအရသာမျိုးတစ်ခါမှမခံစားရသေးဖူး ကောင်းလိုက်တာ
ကိုယ့်လက်ကို ကိုသက်လီးကြီးလို့ သဘောထားလိုက်ကာ နည်းနည်းချင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေး လိုက်တော့ စောစောကအရသာထက်တောင်ပိုကောင်းနေတာကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
အင်း လက်နဲ့တောင်ဒီလောက်ကောင်းနေရင် လီးအစစ်နဲ့သာဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးနော်
စိတ်ကူးနေရင်းက ကိုသက်လီးကြီးကိုသာ မျက်စေ့ထဲမြင်လာတာကြောင့် အသွင်းအထုတ်လုပ်နေတဲ့ လက်တွေက တဖြည်းဖြည်းမြန်လာပါတယ်။
အား…ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုသက်ရယ် ကိုကိုသက်လီးကြီးနဲ့ မေမိုးကိုလာလိုးပေးလိုက်ပါတော့ကွယ် လို့တောင် ပါးစပ်ကတိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်မိပါတယ်။
နောက်တော့ အထဲကနေ ဖျဉ်းခနဲဖြစ်သွားပြီး ခြေထောက်တွေပါတွန့်လိမ်ကောက်ကွေးသွားကာ အကြောထဲအထိ အီဆိမ့်သွားတဲ့အရသာကို မေမိုးတစ်ယောက်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
နောက်တော့ အခြေအနေတွေကို ပြန်ဆင်ခြင်လိုက်မိတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ရှက်သွားကာ လျှာလေးကိုထုတ်လိုက်ကာ ကြည်နူးကျေနပ်မှုတွေနဲ့ အနားကတစ်ရှူးဘူးထဲကတစ်ရှူးစနဲ့ လက်ကိုသုတ်လိုက် ရင်း စောင်လေးကိုခြုံကာ အိပ်လိုက်ပါတော့တယ်။မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုကိုသက်တို့ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာကြောက်နေသလိုပါပဲ။တကယ်တော့ ဟိုက သူတို့အတွဲက ဘာမှတောင်မသိပါဘူး။ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်မလုံဖြစ်နေတာပါ။မနက်စာကော်ဖီ သောက်တော့ ခပ်မြန်မြန်ပဲစားလိုက်ရင်း ကမန်းကတန်းပြန်ထလာလို့ မေမေကတောင်
‘ဟဲ့ မေမိုး အစားနည်းလှချေလား နေရောကောင်းရဲ့’
မေမိုးလည်း စိတ်မပါ့တပါနဲ့ အခန်းထဲဝင်ကာ ခုတင်ပေါ်ကိုလှဲလိုက်ရင်း ခေါင်းပေါ်လက်တင်ကာစဉ်းစားနေ လိုက်မိတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်း စာကျက်ချင်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ အလိုလိုနဲ့ ညတုန်းကအကြောင်းတွေကိုပဲ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ဒီညလည်းသူတို့ လုပ်ကြအုံးမှာပဲ။ခုံပေါ်ကနေတက်ချောင်းရတာအဆင်မပြေလှဘူး။
နောက်တော့မှ အကြံရသွားပြီး သူတို့ဗီရိုနားလောက်ကို ဒီဖက်ခန်းကနေ အချွန်လေးတစ်ခုနဲ့ စိတ်ရှည် လက်ရှည်ထိုင်ကာ ဖောက်နေပါတယ်။နောက်တော့ စက္ကူအညိုရောင်လေးကိုလုံးပြီးပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ကဲမပိုင်လား။ဟိုဖက်ခန်းက ဗီရိုနားကိုလာရင် တံခါးဖွင့်လိုက်ရင် အပေါက်နေရာလေးက ဗီရိုတံခါးနဲ့ အလိုလို ကွယ်ထားပြီးသားလေ။တစ်ယောက်တည်း ကျေနပ်စွာအောင်ပွဲခံလိုက်ရင်း စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွားတာကြောင့် စာကို စိတ်ပါလက်ပါကျက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ညမြန်မြန်ရောက်ပါစေလို့သာ ဆုတောင်းနေလိုက်မိတယ်။
မေမိုး ညစာစားပြီးတော့ အခန်းထဲဝင်ကာ စာအုပ်ကိုင်လို့ စာပြန်ကျက်နေပါတယ်။စာသာကျက်နေတာ ဟိုဖက်ခန်းကအသံတွေကို နားစွင့်နေရတာအမော။ဒီနေ့မှ ဘာဖြစ်တယ်မသိ သူတို့ကအပြင်သွားတာ ကြာလိုက်တာ။ညကိုးနာရီကျော်ကျော်လောက်မှာတော့ သူတို့လင်မယား အပြင်ကနေပြန်လာပါတယ်။ရေမိုးချိုး ကာ အခန်းထဲကိုဝင်သွားတော့ မေမိုးလည်း လက်ထဲကစာအုပ်ကို စားပွဲပေါ်ကိုပစ်တင်လိုက်ရင်း ကပ်ထားတဲ့ စက္ကူစလေးကိုအသာလေးခွာကာ တစ်ဖက်ခန်းကို ချောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။
မေမိုးဆုတောင်းပြည့်ပါတယ်။မေမိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့လင်မယား ခုတင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နမ်းနေကြပါတယ်။နှစ်ယောက်သား နှုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရစုပ်ယူနေတာမို့ ချောင်းနေတဲ့ မေမိုးတောင် ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကို လျှာလေးနဲ့ယက်မိနေပါတယ်။ကိုသက်လက်တွေက မမစိုးကိုယ်ပေါ်က အဝတ် တွေကို ချွတ်ပေးလိုက်နေတုန်း မမစိုးကလည်း အားကျမခံ ကိုသက်အဝတ်တွေကိုပါပြန်ချွတ်ပေးနေပါတယ်။
ခဏချင်းမှာပဲ မမစိုးအဝတ်အစားတွေကင်းမဲ့သွားတာမို့ ကိုသက်က မမစိုးကိုယ်လုံးလေးကို ခုတင်ပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်ရင်း မမစိုးလည်တိုင်လေးကိုနမ်းရှိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လက်ကလည်း မမစိုး နို့တွေကိုကိုင်ကာ နယ်နေတာမို့ မေမိုးလည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုနို့လေးတွေပေါ်လက်ရောက်သွားကာ ညှစ်နေမိပါတယ်။နောက်တော့ ကိုသက်က မမစိုးနို့တစ်လုံးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ စို့ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်က တော့အောက်ကိုဆင်းကာ ပေါင်တန်တွေကိုပွတ်သပ်ပေးနေတော့ မမစိုးလည်းပေါင်လေးတဖြည်းဖြည်းကား လာပါတယ်။
နောက်တော့ ကိုသက်ခေါင်းကြီးက တရွေ့ရွေ့နဲ့အောက်ကိုဆင်းလာကာ မမစိုးပေါင်ကြားထဲရောက် သွားပြီး မမစိုးစောက်ပတ်ကို သူ့လျှာပြားကြီးနဲ့ ပင့်ကာ ယက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မမစိုး တစ်ယောက်လည်း ခေါင်းလေးမော့တက်သွားကာ ကိုသက်ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တင်းတင်းလေးကိုင်ထားပါတယ်။လျှာနဲ့ အယက်ခံနေတဲ့ မမစိုးတော့မသိဘူး။မေမိုးတောင်မှ အထဲကနေဆစ်ခနဲဖြစ်လာပါတယ်။ကိုသက်ရယ် သမီးကို လည်းမမစိုးလိုယက်ပေးပါလားကွယ် လို့တောင်စိတ်ထဲကနေရေရွတ်လိုက်ပြီး လက်ဝါးလေးနဲ့ ကိုယ့်စောက်ပတ် လေးကို အုပ်ကာ ပွတ်နေမိပါတယ်။ကိုသက်တစ်ယောက် မမစိုးစောက်ပတ်ကိုယက်ပေးနေတာ တဖြည်းဖြည်း မြန်လာလေ မမစိုးလည်းအပေါ်မှာ ခေါင်းကိုဘယ်ညာယမ်းနေကာ ခါးလေးကိုကော့ကာပေးနေပါတယ်။
မေမိုးလည်း ကြည့်နေရင်း ဖီးတွေအရမ်းတက်လာတာမို့ ဘောင်းဘီကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး စောက်ပတ်ထဲ လက်ချောင်းလေးကိုစသွင်းလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်က အချစ်နလန်ထနေတာကိုမျက်စိနဲ့ သေချာတွေ့နေရရင်း ကိုယ့်ဖာသာလက်နဲ့ လုပ်နေရလို့မေမိုးလည်း တော်တော်လေးကို အရသာထူးနေပါတယ်။
နောက်တော့ မမစိုးတစ်ယောက် ကော့ပြန်လန်ကာ ငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာ မေမိုး လည်း တစ်ကိုယ်လုံးတုန်တက်လာကာ တစ်ချက်နှစ်ချက်တွန့်သွားပြီး အရသာကောင်းလေးကို ခံစားလိုက်ရပါ တယ်။တစ်ကိုယ်လုံးလည်း မောပန်းနွမ်းနယ်ကာ ခြေလက်တွေတောင်မသယ်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားပါ တယ်။
ကိုသက်က မမစိုးပေါင်ကြားထဲကနေထလာပြီး မမစိုးနားကိုကပ်ကာ တိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်ရင်း ခုတင်ပေါ်ကိုပက်လက်လှန်အိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မမစိုးလည်း အိပ်နေရာကနေပြန်ထလိုက်ပြီး ဆံပင်တွေကို လုံးခြည်လိုက်ကာ ခေါင်းစည်းနဲ့စည်းလိုက်ပြီး ကိုသက်လုံခြည်ကို ဆွဲကာချွတ်လိုက်ပါတယ်။ပါးပျဉ်းထောင်နေ တဲ့မြွေတစ်ကောင်လို ကိုသက်လီးကြီးဟာငေါက်ခနဲ ပေါင်ကြားထဲကနေထောင်ထွက်လာပါတယ်။ရင်ဖိုလိုက်ရ တာကိုကိုသက်ရယ်။အဲဒါကြီးနဲ့ မေမိုးကိုလုပ်ပေးပါလားကွယ်။
မမစိုးလည်း ကိုသက်ပေါင်ကြားထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုသက်လီးကြီးကိုဆုတ်ကိုင် လိုက်ကာ အပေါ်အောက်ဆွဲပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်တော့ မမစိုးခေါင်းလေးငုံ့လိုက်ကာ ပါးစပ်လေး ဟပြီး ကိုသက်လီးကြီးကိုငုံပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုသက်လည်း ပါးစပ်လေးဟသွားပြီး ခေါင်းလေးပါထောင်လာပါ တယ်။မမစိုးဆံပင်းတွေကိုလည်း လက်နဲ့သာသာလေးဖွပေးနေပါတယ်။
အိုး.မမစိုးရယ် မေမိုးလည်းမမစိုးလို စုပ်ချင်လိုက်တာ
မေမိုးလည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လက်ခလယ်လေးကို ပါးစပ်ထဲသွင်းကာ ကိုကိုသက်လီးအမှတ်နဲ့ တစ်ဖက်ခန်းကနေချောင်းနေရင်း စုပ်ယူလိုက်မိပါတယ်။နောက်တော့ ကိုသက်လည်းမမစိုးကို ရပ်ခိုင်းလိုက်ကာ ပက်လက်လေးဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်။မမစိုးပေါင်ကြားထဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ရင်း သူ့လီးကြီးကို အရင်းကနေလက်ကကိုင်ကာ မမစိုးစောက်ပတ်ဝလေးကိုတေ့လိုက်ပြီး မသွင်းသေးပဲ အဝနားမှာကလိပေးနေပါ တယ်။မမစိုးလည်း အားမလိုအားမရဖြစ်လာကာ ကိုကိုသက်ခါးလေးကိုလှမ်းဖက်လိုက်ကာ အောက်ကလည်း အပေါက်တည့်အောင်နေရာရွေ့ပေးနေပါတယ်။
အဲဒါကိုကြည့်နေရင်း မေမိုးလည်း ကိုယ့်လက်ခလယ်လေးကို စိုရွှဲနေတဲ့စောက်ပတ်ဝလေးထဲကို အသာလေးထည့်လိုက်မိပါတယ်။လက်ခလယ်ပေမယ့် အပျိုစောက်ပလေးထဲကို စေးစေးကျပ်ကျပ်လေးဝင်သွား တာမို့ မေမိုးတစ်ယောက် ပါးစပ်လေးပါဟသွားရပါတယ်။နောက်တော့ အသာလေးပြန်ထုတ်လိုက် ပြန်သွင်း လိုက်လုပ်နေမိပါတယ်။တစ်ဖက်ခန်းက ကိုကိုသက်ကလည်း မမစိုးစောက်ပတ်ထဲရောက်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို မှန်မှန်လေးအသွင်းအထုတ်လုပ်နေတာကြောင့် မမစိုးလည်း ကိုကိုသက်ခါးကို ခြေနှစ်ချောင်းချိတ်ထားကာ မျက်လုံးလေးမှိတ်လို့ ပါးစပ်လေးဟကာ ဖီလင်အပြည့်ခံစားနေတာကို ကြည့်နေရင်း မေမိုးလည်း မမစိုးကို မနာလိုတွေဖြစ်နေပါတယ်။
ချက်ခြင်းပဲ အခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားကာ မမစိုးနေရာမှာ ဝင်အလိုးခံချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာပါ တယ်။အထဲကို သွင်းနေတဲ့လက်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းမြန်လာပါတယ်။စိတ်ထဲကလည်း ကိုကိုသက်ကို တောင့်တကာ ကိုကိုသက်လိုးပေးနေတယ်လို့ သဘောထားလိုက်ကာ လက်ကိုတွင်တွင်ကြီး သွက်သွက်လေး လုပ်ပေးနေမိပါတယ်။
အား..ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုသက်ရယ် မေမိုးကိုလာပြီးသာလိုးပေးလိုက်ပါတော့
မေမိုး ပါးစပ်ကနေတောင်တီးတိုးလေးရေရွတ်မိပါတယ်။နောက်တော့ အထဲကနေဖျဉ်းခနဲ ဖျဉ်းခနဲ ဖြစ်သွားကာ တစ်ကိုယ်လုံးရှိသမျှအကြောတွေပါ ဆိမ့်ကျသွားလောက်အောင်ကို ကောင်းသွားပါတယ်။တစ်ဖက် ခန်းကမမစိုးတို့လည်း တစ်ချီပြီးသွားလို့ အဝတ်တွေတောင်ပြန်ဝတ်နေပါပြီ။မေမိုးလည်း ယနေ့အဖို့ လုံလောက် သွားပြီမို့ အသာလေး ခုတင်ပေါ်ပြန်လှဲနေရင်း စဉ်းစားအကြံထုတ်နေမိပါတယ်။
အင်း မမစိုးလိုနေ့တိုင်းသာ အလိုးခံရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ကိုကိုသက်ကို တိုးတိုးလေးဖွင့်ပြောရမှာလား အို..ဘယ်ဖြစ်မတုန်း သူငါ့ကိုအထင်သေးသွားမှာပေါ့။မမစိုးသိရင် ငါ့ကိုသတ်မှာပဲ။ဒါမှမဟုတ် ရည်းစားထားပြီး အလိုးခံရင်ကော။အို..မဖြစ်သေးပါဘူး။ရည်းစားထားတာအိမ်ကသိသွားရင် မိုးမီးလောင်အုံးမယ်။နောက်ပြီး ငါရတဲ့ရည်းစားကရော ကိုကိုသက်လောက်လီးကြီးပါ့မလား။အင်း..ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အို..မစဉ်းစားတော့ ပါဘူးလေ။စာကိုပဲကျက်လိုက်တော့မယ်။မေမိုးတစ်ယောက် ဆန္ဒနဲ့ဦးဏှောက်လွန်ဆွဲကာ ဒွိဟစိတ်တွေနဲ့ အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။နောက်နေ့တွေလည်း ကိုကိုသက်ကို အရောဝင်ဖို့ကြိုးစားမိပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူကကိုယ့်ကို ကလေးလို့ထင်နေလားမသိဘူး။လုံးဝကိုဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြနေတယ်။ဟွန်းမုန်းစရာကြီး။စောင့်ကြည့်လိုက် ပါ။မေမိုးဘယ်လိုအစွမ်းအစရှိလဲဆိုတာကို။အိမ်မှာကတော့ လူကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ လုပ်သာလုပ်နေရတာ သေဘေးကိုလည်းကြည့်နေရသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မေမိုး မမစိုးတို့အခန်းကို နေ့တိုင်းချောင်းကြည့်နေရင်း ကိုယ့်ဖာသာအာသာဖြေနေတာများတော့ စာဖက်ကိုအာရုံမရနိုင်ပဲ လပါတ်စာမေးပွဲမှာ အဆင့်တွေကျလာပါတယ်။ဒါကိုလူကြီးတွေသိတော့ အားလုံးတိုင်ပင်ကြပြီး မမစိုးက
‘ဒါဆိုဒီလိုလုပ်..ကိုသက်ကစောစောပြန်ရောက်တာပဲ မေမိုးကိုစာပြပေးလိုက် စိုးကအလုပ်ကပြန်တာ နောက်ကျတော့ မဖြစ်ဘူး။’
မေမိုးရင်ထဲ ကုလားဘုရားလှည့်သလို ဆူညံသွားပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းကျိတ်ပျော်နေမိတယ်.။
‘အောင်မလေး..ကိုကိုသက်ရယ် အင်ဂျင်နီယာကြီးက ဆယ်တန်းစာလောက်တော့ အပျော့ပေါ့’
‘အေးလေ ဒါဆိုလည်းသင်ပေးရတာပေါ့’ လို့စိတ်မပါ့တပါနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။
မေမိုးလည်း ထခုန်မိမတတ်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ ဒါမှ ကိုကိုသက်နဲ့ အချိန်ပြည့်ထိတွေ့လို့ရမှာလေ။
ဒီလိုနဲ့ မေမိုးတစ်ယောက် ကျောင်းကနေပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်တိုင်း ကိုကိုသက်ကဂိုက်လုပ်ပေးနေတာကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးသင်ယူနေပါတယ်။စာသင်နေရင်းနဲ့ ကိုကိုသက်ကိုခိုးကြည့်ရတာလည်း အရသာပဲ။ညဖက် အိပ်ယာထဲမှာ ကိုကိုသက်ကိုမှန်းပြီး ပိပိလေးကိုပွတ်ရင်း အရသာခံရတာမို့ မေမိုးလည်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ လန်း ဆန်းလာပါတယ်။
နောက်တော့ မေမိုးလည်းတစ်ဆင့်တက်ပြီး ကိုကိုသက်နဲ့စာသင်နေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် အင်္ကျီကိုပါးပါး လေးနဲ့ လည်ဟိုက်တာလေးတွေပဲရွေးကာ ဝတ်ထားပါတယ်။နောက်တော့ လက်ကနေဘောပင်ကိုဆော့ရင်း အောက်ကို တမင်လွှတ်ချလိုက်ကာ ကိုကိုသက်ရှေ့မှာ ကုန်းကောက်ပြလိုက်ပါတယ်။
အစပိုင်းတော့ ကိုကိုသက်တစ်ယောက် မျက်နှာလွှဲနေပေမယ့် နောက်တော့ သူလည်း ဘာသားနဲ့ထု ထားတာမို့လို့လဲ ကြည့်တော့တာပေါ့။ကိုကိုသက်တစ်ယောက် ကြည့်နေရင်း တံတွေးတွေမျိုချနေလိုက်တာ မေမိုးပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်း ကိုကိုသက်မလုံမလဲဖြစ်သွားတဲ့မျက်နှာလေးကိုတွေ့ရလေ မေမိုးတစ်ယောက်ရင်ထဲ မှာတိတ်တိတ်လေးကျိတ်ကာ ကျေနပ်နေမိပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ ကိုကိုသက်စာအုပ်ကိုင်ကာ လမ်းလျှောက်ရင်းစာရှင်းပြနေရင်း မေမိုးလည်ပင်းပေါက်က နေရင်နှစ်မွှာကို ချောင်းကြည့် ကြည့်သွားတာကိုလည်း မေမိုးက ဗီဒိုမှန်ကနေတဆင့်တွေ့နေရပါတယ်။
တစ်လလောက်ကြာတော့ မမစိုးတစ်ယောက် ဖောင်ကြီးဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ကို သင်တန်းတက်ဖို့စာ ရင်းထွက်လာပါတယ်။ကိုကိုသက်ကိုကြည့်ရတာ မှိုင်နေသလိုပဲ။စာသင်တာလည်းစိတ်မပါသလိုပဲ။ဒါများ ကိုကို သက်ရယ် မမစိုးမရှိလည်း မေမိုးကိုလာလိုးလို့ရတာပဲဟာကို။မမစိုးသွားမယ့်ညကတော့ သူတို့လင်မယား ညလုံးပေါက်နီးပါးဆွဲနေကြပါတယ်။မမစိုးလည်း မေမိုးကိုသေချာဂရုတစိုက်သင်ပေးဖို့ကို အထပ်ထပ်မှာရင်း သင်တန်းကို သွားပါတော့တယ်။
ညဖက်စာသင်ချိန်ရောက်တော့ အပါးဆုံး အဟိုက်ဆုံးဆိုတဲ့ အင်္ကျီလေးကိုရွေးဝတ်လိုက်ရင်း မှန်တင်ခုံ ရှေ့မှာသေချာ အလှပြင်လိုက်ကာ သနပ်ခါးပါးပါးလေးလူးကာ ရေမွှေးလေးနည်းနည်းကိုဆွတ်လိုက်ရင်း စာသင် ခုံမှာ သေချာစိတ်ပါလက်ပါထိုင်ကာ ကိုကိုသက်အလာကိုစောင့်နေရင်း အကြံဥာဏ်တွေထုတ်နေမိပါတယ်။
ညစာ စားပြီးတော့ ကိုကိုသက်ရောက်လာပါတယ်။စာသင်နေရင်း မေမိုးကိုခိုးကြည့်နေတာတွေကို မေမိုးတွေ့နေလိုက်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်း စာသင်နေရတာစိတ်မပါသလို မေမိုးလည်းစာထဲကိုစိတ်မ ရောက်ပါဘူး။မေမိုးမှာတော့ တိတ်တခိုးအချစ်ရဲ့ဖမ်းစားမှုတွေကြောင့် ပိုလို့သာခံစားနေရပေမယ့် သူကတော့ အိနြေ္ဒကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ နေနိုင်လိုက်တာ ကိုကိုသက်ရယ်။နောက်ဆုံးတော့ မေမိုးလည်း အချစ်စိတ်ရဲ့စေစားမှုကို တောင့်မခံနိုင်တော့ပဲ စာသင်လို့ပြီးတော့ ကိုကိုသက်နားကိုသွားကာ ကိုကိုသက်လက်မောင်းအိုးကြီးကို မေမိုး နို့လေးနှစ်လုံးကိုပြားကပ်နေအောင်ဖိထားလိုက်ရင်း
‘ဟင် ဘာလုပ်မလို့လဲ’ ပြောပြောဆိုဆို ကိုကိုသက် ဖက်ထားတဲ့မေမိုးလက်ကို ပြန်ဆွဲဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ မေမိုးကအတင်းဖိကာ ဖက်ထားတာကြောင့် သူလည်းဘယ်လိုမှ မလှုပ်သာပါဘူး။
‘ဟိုလေ ကိုကိုသက် ဒီဇင်ဘာကျောင်းပိတ်ရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးသွားမလို့ အဲဒါ’
‘ဟင့်အင်း ပေးမှာလား မပေးဘူးလား ဒါပဲပြော’ လို့ဆိုကာ လက်မောင်းလေးကိုဖိကပ်ထားတဲ့ကိုယ်လုံး ကို လှုပ်ယမ်းပေးလိုက်တော့ ကိုကိုသက်တစ်ယောက် တံတွေးတွေ တဂွပ်ဂွပ်မျိုချနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
‘အေး..အေး ပေးမယ်ကွာ ဖယ်တော့ ကိုကိုသက်ပင်ပန်းလှပြီ လွှတ်တော့နော်’ လို့ပြောကာ အတင်းဆွဲ ဖယ်လိုက်ရင်း သူ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။မေမိုးတစ်ယောက်ကတော့ ကျေနပ်ဝမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာ စာအုပ်တွေကိုသိမ်းလိုက်ပြီး သွားတိုက် အပေါ့အပါးသွားကာ အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။
အခန်းထဲရောက်တော့ ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကို အကုန်ချွတ်လိုက်ကာ ညဝတ်အင်္ကျီလေးကို ကောက်စွပ်လိုက်ပြီး အောက်ကတော့ ဘောင်းဘီတိုလေးကိုဝတ်လိုက်ကာ ခုတင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ရင်း ပက်လက်လေးအိပ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုကိုသက်တစ်ယောက်ဘာများလုပ်နေမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ ဆို့ထားတဲ့ စက္ကူစလေးကို ဖယ်လိုက်ကာ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ ကိုကိုသက်တစ်ယောက် သူ့လက်ပတော့ကိုဖွင့်ကာ အပြာကားကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ညားထားတာ တစ်လလောက်ပဲရှိသေးတော့ သူလည်းမမစိုးကိုဘယ်ခွဲချင်ပါ့မလဲ။အို ကိုကိုသက်ရယ် မမစိုးမရှိလဲ မေမိုးတစ်ယောက်လုံးရှိပါတယ်။မေမိုး ကိုကိုသက်ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ပေးမှာပေါ့။
အပြာကားကြည့်နေရင်း ကိုကိုသက်တစ်ယာက် လုံခြည်စကိုဖြေချလိုက်ရင်း လက်တစ်ဖက်နဲ့ သူ့လီးကြီးကိုကိုင်ထားကာ အပေါ်အောက်လှုပ်ရှားနေရင်း ဂွင်းတိုက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်အောင့် လောက်ကြာတော့ ကိုကိုသက်မျက်နှာကြီး ရှုံ့မဲ့သွားကာ ဖြူဖြူပျစ်ပျစ်အရည်တွေ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပန်းထွက် ကုန်ပါတော့တယ်။မေမိုးလည်း အသာလေးပြန်လှဲနေလိုက်ကာ စတင်အိပ်စက်လိုက်ပါတယ်။အိပ်မက်ထဲမှာ တော့ မေမိုးနဲ့ကိုကိုသက်တို့ ချစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနေကြမယ်ဆိုတာကတော့ အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။နောက်နေ့ကျောင်းလွှတ်ချိန်ရောက်တော့ မေမိုးကျောင်းဝကိုလျှောက်လာရင်း ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်မျက်လုံးကိုတောင်မယုံနိုင်ပါဘူး။ကိုကိုသက်တစ်ယောက် မေမိုးကိုလာကြိုနေတယ်လေ။ခါတိုင်းတစ်ခါမှ လာမကြိုဘူးတော့အရမ်းကိုအံ့သြမိတာပေါ့။ပြုံးစစနဲ့ ကိုကိုသက်မျက်နှာကို တွေ့လိုက်ရတော့ မေမိုးရင်ထဲ ရှက်သလိုလို ပျော်သလိုလိုပါပဲ။ကားပေါ်ရောက်တော့
‘ဟုတ်တယ်မေမိုးရဲ့ ဒီနေ့ကိုကိုသက် အလုပ်ကအပြန်စောတယ်လေ’
‘ကောင်းပါတယ် နို့မို့ဆို ဘတ်စကားနဲ့ပြန်ရမှာ ဒီအချိန်ကားကကြပ်တယ်လေ။’
‘နောက်ဆို အလုပ်အပြန်စောရင် ကိုကိုသက်ဝင်ခေါ်မယ်လေ’
နှစ်ယောက်သား စကားမဆက်မိကြပါဘူး။ခံစားချက်တွေကိုယ်စီနဲ့ဆိုတော့ နှစ်ယောက်လုံးက ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်မလုံဖြစ်နေကြတော့ ပြောစရာစကားလုံးတွေကသိပ်မရှိဘူးလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲ အိမ်ပြန်ရောက် လာကြပါတယ်။
စာသင်ချိန်ရောက်တော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း မေမိုးကိုကြည့်နေတဲ့ ကိုကိုသက်မျက်လုံးရွဲကြီးတွေကို မေမိုးရင်မဆိုင်နိုင်တော့လို့ မေမိုးခေါင်းလေးငုံ့ထားရပါတယ်။သူသိပ်ဆိုးတာပဲကွာ မပွင့်တပွင့်နဲ့ သူများနေရတာ ခက်လိုက်တာ။စာသင်လို့ပြီးတော့ မေမိုးစာအုပ်တစ်ထပ်နဲ့ထလိုက်တာ စားပွဲခုံခြေထောက်ကို ခလုတ်တိုက်မိလို့ ခန္ဓာကိုယ်ကယိုင်သွားပါတယ်။ကိုကိုသက်က လှမ်းဖမ်းလိုက်တာမို့ မေမိုးကိုယ်လုံးလေး ကိုကိုသက်ရင်ခွင်ထဲကို အလိုက်သင့်လေးမှီကျသွားပါတယ်။စာအုပ်တွေကတော့ ကြမ်းပေါ်မှာပွလို့ပေါ့။
စိတ်ကူးနဲ့သာ မေမိုးတစ်ယောက်ရူးနေတာပါ။တကယ်တမ်း နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကိုကိုသက်ရင်ခွင်ထဲလဲ ရောက်ရော မေမိုးခြေတွေလက်တွေသာမက အသံတွေတောင်တုန်နေပါတယ်။ကမန်းကတန်းလှမ်းဆွဲလိုက်လို့ ကိုကိုသက်လက်တစ်ဖက်က မေမိုးရင်အစုံပေါ်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူကလည်း ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ကြောင် နေပါတယ်။ဒါကိုပဲ မေမိုးတစ်ယောက် ရင်တွေတလှပ်လှပ်ခုန်နေရပါတယ်။ဝတ်ထားတဲ့ ဘရာစီယာကလည်း ပါးတာကြောင့် တကယ့်အသားအတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။မေမိုးလည်း အသာလေးရုန်းလိုက်တော့မှ သူလည်း သတိပြန်ဝင်လာကာ
မေမိုးလည်းထူပူနေတော့ ဘာစကားမှာပြန်မပြောနိုင်ပဲ ကိုကိုသက်ရင်ခွင်ထဲက ရုန်းထွက်လိုက်ကာ စာအုပ်တွေကို ကပြာကယာ ကောက်လိုက်ရင်း အခန်းထဲဝင်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုသက်တစ်ယောက်သာ အပြင်မှာ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
အခန်းထဲရောက်တော့ ခုန်နေတဲ့ရင်ခုန်သံဟာ တော်တော်နဲ့ကိုမရပ်သေးပါဘူး။ဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးကို ခဏလေးပဲခံစားလိုက်ရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်နေမိပါတယ်။တော်တော်ကြာ ကြာလေးနေလိုက်မိရင်ကောင်းသား။အခုတော့ ကိုကိုသက်လက်လေးနဲ့ကိုင်မိတဲ့ ရင်သားလေးတွေကို နှမြော တသစွာ ကိုင်ကြည့်နေမိပါတယ်။အို ရှက်လိုက်တာ။သူရောဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ။သူလည်းရင်တွေခုန်နေ တယ်ဆိုတာမေမိုးလည်း သိပါတယ်။သူ့ရင်ခွင်ထဲခေါင်းကရောက်နေတာကိုး။
မေမိုးလည်း ညဝတ်အင်္ကျီိကိုလဲလိုက်ရင်း ခုတင်ပေါ်ကိုတက်ကာ ခေါင်းအုံးလေးကို ကျစ်ကျစ်ပါ အောင်ဖက်ထားလိုက်ရင်း စောစောကအဖြစ်အပျက်လေးကို တနုံ့နုံ့ခံစားနေမိပါတယ်။ကိုကိုသက်အခန်းတံခါး ပိတ်သံကြားလိုက်တော့ မနေ့ကလိုမျိုးတွေ့ရမလားဆိုပြီး အပေါက်ကနေပြန်ချောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။
အခန်းထဲရောက်ရောက်ခြင်း ကိုကိုသက်တစ်ယောက် ခုံပေါ်ကအရက်ပုလင်းထဲကအရက်တစ်ခွက်ကို ငှဲ့လိုက်ရင်း တစ်ရှိန်ထိုးသောက်ချလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သွားပါပြီ ဒီညတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ မကျေမနပ်နဲ့ ပါးစပ်ကနေစူပွစူပွပြောလိုက်ရင်း အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။
တစ်အောင့်မှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားပြီး အသားကိုလာထိနေလို့ ရုတ်တရက်မျက်လုံးကိုအသာလေးဖွင့် ကြည့်လိုက်မိတော့ မေမိုးလန့်မအော်မိအောင်ကြိုးစားလိုက်ရပါတယ်။….
ကိုကိုသက်တစ်ယောက် မေမိုးခုတင်ပေါ်မှာတင်ပါးလွှဲထိုင်နေရင်း မေမိုးနို့လေးတွေကို အင်္ကျီပေါ်က နေအသာလေးဆုပ်ကိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုကိုသက် စောစောပိုင်းကအဖြစ်တွေကြောင့် သူလည်းမခံစား နိုင်တော့လို့ အရက်တွေသောက်ကာရဲဆေးတင်ပြီး မေမိုးအခန်းထဲကိုဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
မေမိုးလည်း ရုန်းဖယ်လိုက်ရနိုးနိုး ဆက်ဟန်ဆောင်ရနိုးနိုးနဲ့ စိတ်နှစ်ခုလွန်ဆွဲနေပါတယ်။ငါအခုနေ ရုန်းလိုက်ရင် သူပြန်ထွက်သွားမှာပေါ့။ဆက်ပြီးအိပ်ပျော်ဟန်ဆောင်နေရင်လဲ သူကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ ကိုလည်းသိချင်နေသေးတယ်။ရင်သားတစ်ဝိုက်မှာလည်း ရွစိရွစိဖြစ်နေပါတယ်။ဘာမှအခုအခံမဝတ်ထားတော့ သူလည်း စိတ်တိုင်းကျ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေပါတယ်။မေမိုးလည်း ပါးစပ်ကအသံမထွက်မိအောင် အားတင်း ထားလိုက်ကာ ဆက်ပြီးမျက်စိမှိတ်နေလိုက်မိပါတယ်။
မေမိုးတစ်ယောက် တိတ်တခိုးလေးစာစွဲလမ်းလို့နေပေမယ့်လည်း အခုလိုကြီးအခန်းထဲကို အသာလေး ဝင်လာကာ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ ကိုယ်တွယ်ပွတ်သပ်နေတဲ့ ကိုကိုသက်ကို ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတော့ နည်းနည်း တော့ကြောက်သွားတာအမှန်ပါပဲ။အခုမှပဲသေချာတွေးမိတယ်။မေမိုးအော်လိုက်လို့ လူကြီးတွေနိုးသွားရင် ကိုကိုသက်ရောမေမိုးပါ ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်သွားနိုင်တယ်။နောက် လူကြားမကောင်း သူကြားမ ကောင်းဖြစ်မှာလည်း အသေအချာပါပဲ။အိုး..ပြောရင်းဆိုရင်း မေမိုးနို့သီးခေါင်းလေးကိုသူစမ်းမိသွားပါတယ်။ မေမိုးနို့သီးခေါင်းလေးကလည်း နည်းနည်းလေးကြွတက်လာတာကြောင့် ကိုကိုသက်က လက်မနဲ့လက်ညှိုး ကြားညှပ်ကာ ဖိခြေပေးနေပါတယ်။မေမိုးတစ်ယောက် အသံမထွက်မိအောင်ကို မနည်းကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက် ရပါတယ်။
မေမိုးငြိမ်နေတာကို သူသိသွားလားမသိဘူး။မေမိုးမျက်နှာပေါ်ကို သူ့မျက်နှာကြီးအုပ်မိုးလာတာကို ကိုကိုသက် နှာခေါင်းကလေပူတွေကြောင့် မေမိုးသိလိုက်ပါတယ်။အရက်နံ့ကလည်းထောင်းခနဲ ရလိုက်တာမို့ မေမိုးလည်းအသာလေး အသက်အောင့်ထားလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်ကမေမိုးနဖူးလေးကိုတစ်ချက်နမ်းလိုက် ပါတယ်။နောက်တော့ မေမိုးဆံပင်လေးတွေကိုလက်နဲ့သပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆံပင်တွေကိုသပ်တင်ပေး လိုက်ပြီး မေမိုးလည်တိုင်လေးကို သူ့ပါးစပ်ကြီးနဲ့ငုံလိုက်မိချိန်မတော့ မေမိုးဘယ်လိုမှ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေ လို့မရတော့ပါဘူး။
မေမိုးအသံကြောင့် ကိုကိုသက်ပြန်ခွာသွားပါတယ်။မေမိုးလည်း မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကိုသက်က မေမိုးကို သူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်ကို လက်ညှိုးလေးတင်ပြကာ တိတ်တိတ်နေဆိုတဲ့ သဘောမျိုးလုပ်ပြ ပါတယ်။နောက်တော့ မေမိုးနှုတ်ခမ်းပါးလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းထူကြီးနဲ့ ဆွဲစုပ်ယူကာ နမ်းလိုက်မိချိန်မတော့ မေမိုး လည်းတင်းထားသမျှ အကုန်လုံးအရည်ပျော်ကျသွားကာ မျက်လုံးလေးတွေပါစင်းကျသွားပါတော့တယ်။
မေမိုးလည်း နဂိုကမှ တိတ်တိတ်လေးကျိတ်ခါ ချစ်နေရသူမို့ အခုလိုကိုယ်တွေ့ခံစားလိုက်မိချိန်မတော့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ကိုကိုသက်အနမ်းတွေကိုပြန်တုန့်ပြန်လိုက်မိပါတယ်။
ကိုကိုသက်လည်း မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းနေရင်း သူ့လျှာကြမ်းကြီးကို မေမိုးပါးစပ်ထဲအတင်းထိုး ထည့်ကာ မေမိုးပါးစပ်ထဲမှာ မြွေတစ်ကောင်လိုလျှောက်ကစားနေပါတယ်။မေမိုးလည်း သူ့လျှာကြီးကို ကိုယ့်လျှာ လေးနဲ့ထိမိတဲ့အခါ တစ်ကိုယ်လုံး သိမ့်ခနဲဖြစ်သွားတာမို့ အလိုက်သင့်လျှာလေးပြန်ထုတ်ပေးလိုက်မိပါတယ်။ ကိုကိုသက်က မေမိုးလျှာလေးကိုနှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနဲ့ စုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။လက်တစ်ဖက်ကမေမိုး အင်္ကျီကြယ်သီး တွေကိုတစ်ခုခြင်းဖြူတ်နေပါတယ်။
ကြယ်သီးတွေပြုတ်သွားလို့ လွတ်ထွက်လာတဲ့ မေမိုးရဲ့ဖိုဆိုလို့ ယင်ဖိုတောင်မသန်းရသေးတဲ့ ကိုယ်တိုင်တောင် ရေချိုးတုန်းဆပ်ပြာတိုက်တဲ့အချိန်ပဲကိုင်မိတဲ့ နို့အုံလုံးလုံးလေးကို သူ့လက်ကြမ်းကြီးနဲ့ ဆုပ်ကာ ဖွဖွလေးညှစ်ပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း အရသာတွေက တလိပ်လိပ်နဲ့ ရင်ခေါင်းထဲကတက်လာတာ မို့ ကျောပြင်လေးပါ အိပ်ယာပေါ်ကနေကြွတက်လာပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်နယ်နေရင်းက နို့သီးခေါင်းလေး ကိုလက်မနဲ့ ဖိကာပွတ်ပေးနေတာကြောင့် မေမိုးလည်း စိတ်တွေထကြွလာကာနို့သီးလေးတွေပါ ထောင်တက်လာပါတယ်။ မေမိုးနို့လေးတွေကို ကိုကိုသက်ကို စို့ပေးစေချင်တာကြောင့် လည်တိုင်နားမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ကိုကိုသက်ခေါင်းကို အောက်ကိုအသာလေးတွန်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုကိုသက်ကတော့ အထူးကျွမ်းကျင်နေတာကြောင့် မေမိုးဘာလိုနေလဲဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပြီး ကော့ထောင်နေတဲ့ မေမိုးနို့သီးလေးကို ပါးစပ်ထဲကိုထည့်ကာ လျှာလေးနဲ့ဝိုက်ကာ ကစားပေးရင်း တစ်ချက်တစ် ချက် စို့ပေးနေပါတယ်။လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျန်တဲ့နို့သီးခေါင်းလေးကို ခြေပေးလိုက် နို့အုံလေးကို ဆုပ်ပေး လိုက်နဲ့မို့ မေမိုးလည်း ကိုကိုသက်ခေါင်းကြီးကိုသာ ရင်ဘတ်နဲ့ကပ်ကာ ဖက်ထားနေမိပါတယ်။
မေမိုးပါးစပ်က ညည်းသံလေးတွေပါထွက်လာတာကြောင့် ကိုကိုသက်လည်း မေမိုးနို့လေးနှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီပြောင်းကာ စို့ပေးနေပါတယ်။လက်ကလည်းအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာကာ မေမိုးဗိုက်သား လေးကိုပွတ်ပေးနေပါတယ်။နောက်တော့ အောက်ကိုရွေ့လာပြီး မေမိုးပေါင်တန်လေးတွေကို ဒူးခေါင်းကနေစပြီး အပေါ်ကို လက်ထိပ်ဖျားလေးနဲ့ တရွရွတက်လာကာ နေမရထိုင်မရဖြစ်အောင်ကလိပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း ပေါင်တန်လေးကို မသိမသာလေးကားပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုကိုသက်က မေမိုးစောက်ပတ်နေရာလေးကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ လက်ဝါးလေးနဲ့အသာအုပ်ကာ ကိုင်လိုက်မိချိန်မတော့
ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုသက်ရယ် ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ပွတ်တာထက် တခြားစီပဲ မေမိုးလည်းခါးလေးပါ ကော့တက်သွားပါတယ်။ကိုကိုသက်က အကွဲကြောင်းနေရာလေးကို လက်ချောင်းလေးနဲ့ အစုန်အဆန်ပွတ်ပေး နေပြီးတော့ မေမိုးဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ဖို့ပြင်လိုက်တော့ မေမိုးလည်း ဒီထက်ပိုတဲ့အရသာကို ခံစားချင်လှပြီမို့ မရှက်အားတော့ပဲ အလိုက်သင့်လေး ခါးလေးပါကြွပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘောင်းဘီလေးကျွတ်သွားလို့ ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတဲ့ မေမိုးစောက်ပတ်လေးကို ကိုကိုသက်က သေချာကြည့်နေတာမို့ မေမိုးလည်း ရှက်လွန်းလို့ လက်ဝါးလေးနဲ့အုပ်ထားမိပါတယ်။နောက်တော့ ကိုကိုသက် ခေါင်းလေးက အောက်ကိုငုံ့ဆင်းလာကာ မေမိုးပေါင်တွင်းသားလေးကို လျှာစောင်းလေးနဲ့ ဒူးနားကနေအပေါ်ကို တောက်လျှောက်ဆွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်တော့ ပေါင်ကြားနေရာလေးကို စုပ်ပေးလိုက် မေမိုးလက်ဝါးနဲ့ကွယ်ထားလို့ လွတ်တဲ့နေရာလေး ကိုလျှာထိပ်လေးနဲ့ထိုးလိုက် ကလိပေးနေတာမို့ မေမိုးလည်း ဆက်အုပ်ထားဖို့အင်အားမရှိတော့ပဲ လက်ဝါးလေး ကိုဖယ်ပေးလိုက်ကာ ရှေ့ဆက်ခံစားရမယ့် အရသာကိုငံ့လင့်နေမိပါတယ်။
လွတ်လပ်သွားတဲ့ စောက်ပတ်လေးကို ကိုကိုသက်က သူ့လျှာကြမ်းကြီးနဲ့ အပြားလိုက်အောက်ကနေ အပေါ်ကို ယက်တင်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
ပေါင်တန်လေးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ထားတဲ့ ကိုကိုသက်လက်ကို မေမိုးတင်းတင်းလေးဆုပ်ကာ ကိုင်ထား လိုက်မိပါတယ်။ရင်ထဲမှာလည်း ဗလောင်ဆူနေပါတယ်။ပေါင်တန်လေးကိုလည်း ကားသထက်ကားပေးနေလိုက် ပါတယ်။
စောက်ပတ်လေးကို လျှာနဲ့ယက်ပေးနေရင်း ကိုကိုသက်က သူ့လျှာလေးကို မေမိုးစောက်ခေါင်းလေးထဲ ကိုထည့်လိုက်ကာ အထဲကိုထည့်ကာ အထဲမှာကစားပေးလိုက် စောက်စေ့လေးကို လျှာထိပ်လေးနဲ့ထိုးပေးလိုက် နဲ့ လုပ်ပေးနေတာမို့ မေမိုးတစ်ယောက် တစ်ကိုယ်လုံးကအကြောတွေ တဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့ထကြွလာပါတယ်။ ကိုကိုသက်ခေါင်းကြီးကိုလည်း စောက်ပတ်နဲ့ကွာသွားမှာစိုးလို့ လက်နဲ့အတင်းဖိကပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကိုကို သက်က တစ်ခါတစ်ခါ စောက်စေ့လေးကို နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနဲ့ညှပ်ကာ စုပ်ပေးလိုက်ချိန်မတော့
အထဲက ကလီစာတွေပါ ပြုတ်ပါသွားမလားတောင်ထင်ရတယ် ကိုကိုသက်ရယ်။
နောက်တော့ ကိုကိုသက်က အရည်တွေစိုနေတဲ့ မေမိုးစောက်ခေါင်းလေးထဲကို သူ့လက်ခလယ်လေး နဲ့အဝနားမှာ ကလိပေးလိုက်ရင်း လက်တစ်ဆစ်လောက် အထဲကိုသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။မေမိုးတစ်ယောက် ခေါင်းလေးပါထောင်ထလာပါတယ်။နောက်တော့ စောက်စေ့လေးကိုပဲ အသားပေးကာယက်ပေးနေရင်း လက် ခလယ်ကို တဖြည်းဖြည်းအထဲကိုသွင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ အထဲကအတွင်းသား နူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေကို လက်ခလယ်နဲ့ ပွတ်ကာဆွဲပေးနေပါတယ်။
မေမိုးလည်း ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ပါဘူး။ရှိသမျှအားနဲ့ အထဲကိုဝင်လာတဲ့ လက်ခလယ်ကို ညှစ်ပေး ထားလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်ကတော့ အားနေတဲ့လက်တစ်ချောင်းကို မေမိုးနို့သီးခေါင်းလေးဆီပို့ကာ လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ညှပ်ကာ ခြေပေးနေပါတယ်။နို့သီးခေါင်းကိုလည်းကလိခံရ ၊ စောက်စေ့လေးကိုလည်းလျှာနဲ့ အယက်ခံရ ၊ စောက်ခေါင်းထဲကိုလည်း လက်ချောင်းလေးနဲ့ကလိခံရတာတင်မက ကိုကိုသက်လက်သန်းလေး ကတစ်ချက်တစ်ချက် စအိုဝလေးကိုပါ လာလာပွတ်ဆွဲနေတာကြောင့် မေမိုးလည်း ခဏချင်းမှာပဲ တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်လာကာ စောက်ခေါင်းထဲကအရည်တွေတပျစ်ပျစ်နဲ့ ကျဆင်းလာပါတော့တယ်။ကိုကိုသက်ခေါင်းကဆံ ပင်တွေကိုလည်း အတင်းဆောင့်ဆွဲထားကာ အရသာထူးတွေကိုတစ်ဝကြီးခံစားလိုက်ရပါတယ်။
နောက်တော့ ကိုကိုသက်က မေမိုးပေါင်ကြားထဲကနေထလာပြီး လုံခြည်ကိုဖြေချလိုက်တော့ မေမိုးစိတ် ကူးထဲကနေ စွဲလမ်းနေတဲ့ ကိုကိုသက်လီးကြီးဟာ ငေါက်ခနဲထွက်လာပါတော့တယ်။ကိုကိုသက်က မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ယူပေးလိုက်ရင်း မေမိုးမျက်နှာနားကို သူ့လီးကြီးကိုတိုးလာပါတယ်။နောက်တော့ မေမိုးနှုတ်ခမ်းနားမှာ တရမ်းရမ်းနဲ့လုပ်ပြနေပါတယ်။စိတ်ကူးနဲ့သာ စုပ်ပေးချင်နေတာ တကယ်တမ်းတော့မေမိုး ကိုကိုသက်လီးကြီးကို ကိုင်ကြည့်ဖို့တောင် မဝံ့ရဲပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုကိုသက်ဘာလိုနေတယ်ဆိုတာကို မေမိုးလည်းအလိုလိုသိလာပြီမို့ မေမိုးပါးစပ်လေးကို အဆင်သင့် ဟပေးထာလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်ကလည်း မေမိုးဟပေးထားတဲ့ပါးစပ်လေးထဲကို သူ့လီးကြီးကို ဖြည်းဖြည်းလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ညှီစို့စို့အနံ့နဲ့ ငန်ကျိကျိအရသာလေးတွေကိုစတင်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကိုကိုသက်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ သူလည်းတော်တော်လေးအရသာတွေ့နေပုံရတာကြောင့် မေမိုးလည်း လျှာလေးကိုနည်းနည်းလှုပ်ပေးကာ ကစားပေးလိုက်ပါတယ်။
‘ရှီး..ကျွတ်..ကျွတ်..ကောင်းလိုက်တာ ကလေးရယ်’ လို့ပြောကာ မေမိုးဆံနွယ်တွေကို ဖွပေးလိုက်ရင်း ကိုကိုသက်ခါးလေးကိုပါ ကော့ကော့ပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း နှုတ်ခမ်းလေးကို တင်းတင်းလေးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးလိုက်ရင်း လျှာလေးကိုအပြားလိုက်လေးလုပ်ပေးလိုက်တော့ ကိုကိုသက်က ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လေး ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးနေပါတယ်။တော်တော်လေးကြာတော့ ကိုကိုသက်က မေမိုးပါးစပ်ထဲကနေ သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားကာ မေမိုးသွားရည်တွေနဲ့စိုရွှဲနေတဲ့ သူ့ဟာကို မေမိုးစောက်ပတ်ဝ လေးကိုတေ့လိုက်ကာ အဝနားမှာ စုန်ခြည်ဆန်ခြည်ပွတ်ပေးနေပါတယ်။
မေမိုး ညည်းသံလေးကိုကြားတော့ ကိုကိုသက်လည်း သူ့လီးကို မေမိုးစောက်ပတ်လေးထဲကို ဖိကာ အထဲကိုနည်းနည်းသွင်းလိုက်တော့ တစ်လက်မလောက်ဝင်သွားပါတယ်။အပျိုစင်စောက်ပတ်လေးမို့ ကိုကိုသက် လီးကတစ်လက်မလောက်သာဝင်နေပေမယ့် မေမိုးတစ်ယောက် အသည်းခိုက်လောက်အောင်နာကျင်နေတာမို့
‘အား..အား..နာလိုက်တာ သေပါပြီ မရဘူးထင်တယ်’ လို့ပြောကာ ကိုကိုသက်ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက် နဲ့ပြန်တွန်းထားပါတယ်။ကိုကိုသက်ကလည်း ကျွမ်းကျင်နေသူပီပီ ဆက်မသွင်းသေးပဲ မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးစုပ်ယူပေးလိုက်ကာ လက်တစ်ဖက်က နို့အုံလေးကိုနာနာလေးခြေပေးလိုက်ပါတယ်။
စောစောက နာကျင်နေတာတွေ ဘယ်ရောက်မှန်းမသိအောင် အရသာကကောင်းနေတာကြောင့် မေမိုးလည်း ကိုကိုသက်အနမ်းတွေကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ ကိုကိုသက်က ဖြည်းဖြည်းချင်း တရစ်ရစ်နဲ့ အထဲကိုသွင်းနေပါတယ်။
မေမိုးလည်း နာပေမယ့် နောက်ထပ်ခံစားရမယ့် အရသာထူးကို အဆုံးစွန်အထိခံစားလိုတဲ့စိတ်ကြောင့် အံကြိတ်ကာခံနေပါတယ်။အထဲကို တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက် ရောက်သွားတော့ အတွင်းပိုင်းက လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် တစ်စုံတစ်ခုက ဆီးကာနေတာကြောင့် ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။မေမိုး လည်းနာလွန်းလို့ ရှုံ့မဲ့နေပါတယ်။နဂိုထဲက စောက်ခေါင်းလေးက ကျဉ်းနေတဲ့အပြင် အပျိုမြေးလေးကပါ ခံနေ တာကြောင့် မေမိုး စောက်ခေါင်းထဲ တင်းကျပ်ပြည့်လျှံနေပါတယ်။
ကိုကိုသက်ကတော့ ဆက်မသွင်းသေးပဲ မေမိုးနားသီးလေးကိုစုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်အသာလေး ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး အဖျားလေးတင်ပဲ အသာလေးညှောင့်ပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း နာကျင်နေတာတွေ သက်သာလာကာ စောက်ခေါင်းထဲက ကိုကိုသက်လီးကြီးကို အဆုံးအထိဝင်စေချင်နေတာကြောင့် ကိုကိုသက် ခါးလေးကို လက်နဲ့ကိုင်ကာ နည်းနည်းဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။စောက်ခေါင်းထဲမှာလည်း အရည်ကြည်တွေထွက် လာတာမို့ နည်းနည်းတော့ အဝင်အထွက်လေးသွက်လာပါတယ်။
မေမိုး ဘာလိုချင်နေတယ်ဆိုတာကို ကိုကိုသက်တစ်ယောက် သဘောပေါက်လိုက်ပြီး မေမိုးနားရွက်နား ကိုတိုးတိုးလေးကပ်ကာ
‘မေမိုး..နည်းနည်းတော့အောင့်ခံနော် တော်ကြာကောင်းလာတော့မှာပါ’ လို့ပြောလိုက်တော့ မေမိုးလည်း အဆုံးထိခံချင်နေပြီမို့ ခေါင်းလေးပဲညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်က မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံနဲ့စုပ်ယူပေးလိုက်ရင်း လက်ကမေမိုးခါးလေးကို ထိန်းကာ အားနည်းနည်းစိုက်ပြီး သူ့လီးတန်ကြီး ကိုအထဲကိုဖိကာ သွင်းပေးလိုက်တော့ အချစ်လမ်းကြောင်းမှာ တံတိုင်းတစ်ခုလို ဆီးကာနေတဲ့ မေမိုးအပျိုမြေး လေးကိုပါ မညှာမတာထိုးခွဲသွားတဲ့အပြင် စောက်ခေါင်းလေးကကျဉ်းတာမို့ နှုတ်ခမ်းသားလေးပါ ဖတ်ခနဲ ကွဲသွားကာ ဆီးစပ်နှစ်ခုထိလုနီးနီး အတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်သွားပါတယ်။
မေမိုး တစ်ယောက် အသည်းပေါက်မတတ် နာကျင်လွန်းတဲ့ ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရတာမို့ အသားကုန် အော်ဟစ်လိုက်ချင်ပေမယ့် ကိုကိုသက်ကနှုတ်ခမ်းကို လုံးဝလွှတ်မပေးတာကြောင့် မေမိုးအော်သံဟာ ကိုကို သက်ပါးစပ်ထဲမှာပဲ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။မေမိုး လက်နှစ်ဖက်က အိပ်ယာခင်းစကို တင်းတင်းကြီးဆုပ် ကိုင်ထားလိုက် ကိုကိုသက်ကျောပြင်ကြီးကို ကုတ်ခြစ်လိုက်နဲ့ ဝေဒနာကိုခံစားနေရပါတယ်။
ကိုကိုသက်က ဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ထုတ်လိုက်တော့ လီးတန်မှာသွေးစလေးတွေ ကပ်ပါလာပါတယ်။ ဒါကိုမေမိုးမြင်လိုက်တော့
‘ဟဲ့တော် သွေးတွေ သွေးတွေ. ကွဲပြဲကုန်ပြီလားမသိဘူး သမီးကြောက်တယ်’
‘မကြောက်ပါနဲ့ မေမိုးရယ် ရှေ့ဆက်ကောင်းဖို့ပဲရှိတော့တာ အပျိုမြေးလေးပေါက်သွားတာပါ’ လို့ပြန်ပြော ကာ နည်းနည်းချင်းသွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်နဲ့လုပ်ပေးနေပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကလည်း မေမိုးနို့အုံလေးကို ညှစ်ပေးလိုက် ပါးစပ်နဲ့ကုန်းကာစို့လိုက် လုပ်ပေးနေပါတယ်။
မေမိုးလည်း ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေရာမှ ကိုကိုသက်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်မှုတွေကြောင့် အထဲကနာကျင်မှုတွေပျောက်ကာ တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာတဲ့ အရသာကိုစတင်ခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုလည်း ကားသထက်ကားပေးလာပါတယ်။အပေါ်ကနေ ကိုကိုသက်တစ်ချက်သွင်း လိုက်တိုင်း ခါးလေးကိုလည်း တစ်ချက်တစ်ချက် ပြန်ကော့ပေးလာပါတယ်။ကိုကိုသက်က ခဏရပ်လိုက်ရင်း
‘ရှင်’ မောဟိုက်နေတဲ့လေသံနဲ့ မေမိုးပြန်ထူးလိုက်ပါတယ်။
‘ချစ်တယ်ကွာ’ လို့ပြောလိုက်ရင်း မေမိုးပါးလေးကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်။
‘မေမိုးလည်း ချစ်ပါတယ် ကိုကိုသက်ရယ်’လို့ပြောကာ ပြန်နမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ နှစ်ယောက်သား နှုတ်ခမ်းချင်း တပ်မက်စွာနမ်းနေလိုက်ကြပါတယ်။
‘နာတာပေါ့ကိုကိုသက်ရယ် အထဲကအောင့်တောင့်တောင့်နဲ့ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့’
‘ဒါဆို ကိုကိုသက်နည်းနည်း မြန်မြန်လေးလုပ်ကြည့်မယ်နော်’
‘လုပ်ကြည့်လေ ကိုကိုသက် မေမိုးခံနိုင်မယ်ထင်တာပဲ’
ကိုကိုသက်လည်း မေမိုးစောက်ပတ်လေးထဲကို လီးတန်ကိုပြန်သွင်းလိုက်ကာ ခါးလေးကိုမှန်မှန်လေး ညွှတ်ပေးကာ ညှောင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မေမိုးတစ်ယောက်လည်း နာကျင်တာရော ကောင်းတာရော အရသာ နှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်ခံစားနေတာမို့ ပါးစပ်လေးဟကာ ခေါင်းလေးပါ ဘယ်ညာယမ်းနေပါတယ်။
နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းအရသာတွေ့လာတာမို့ ကိုကိုသက်ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့လာဖက် ထားပါတယ်။ကိုကိုသက်လည်း ဆောင့်ချက်တွေက ပိုမြန်လာပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့ ဆီးစပ်နှစ်ခုရိုက်သံ တစ်ဖတ်ဖတ် မြည်နေပါတယ်။
‘ဒါဆိုရင် မောင် လို့ခေါ်’
‘မောင်..အရမ်းချစ်တာပဲ’ လို့ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ ကိုကိုသက်ရင်ခွင်ထဲခေါင်းလေးပုသွားပါတယ်။
ကိုကိုသက်လည်း မေမိုးပေါင်တန်လေးနှစ်လုံးကို ပုခုံးပေါ်ကိုထမ်းတင်လိုက်ပြီး အားထည့်ကာ ဆောင့်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ကိုကိုသက် စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ မေမိုးအဖုတ်လေးကွဲထွက်မတတ် အဆက်မပြတ်ညှောင့်ပေးနေတာမို့ မေမိုးလည်း အားကျမခံ အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ ကိုကိုသက်လီးကို ညှစ်ပေးနေပါတယ်။မေမိုး အထဲကနေ ညှစ်ပေးတာ ကောင်းလွန်းလို့ ဆောင့်ချက်တွေတောင် တစ်ခါတစ်ခါရပ်သွားရပါတယ်။နောက်တော့ နှစ်ယောက် သား ကာမပန်းတိုင်ကို တက်ညီလက်ညီ လှော်နေကြရင်း ကိုကိုသက်က မေမိုးစောက်ခေါင်းထဲ သုက်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်နေတုန်း မေမိုးလည်း တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ တုန်တက်သွားကာ အကြောထဲသာမက ရိုးတွင်းချဉ်ဆီပါဆိမ့်သွားလောက်အောင် ကာမအရသာထူးကြီးကို ခံစားလိုက်ရတာမို့ ကိုယ်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျလာ တဲ့ ကိုကိုသက် ကိုဆီးကာဖက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုကိုသက်က မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကို မြတ်နိုးစွာနမ်းရှိုက်နေတော့ မေမိုးလည်း အားရကျေနပ်မှုတွေနဲ့ ကိုကိုသက်ကိုပြန်နမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ ကိုကိုသက်က ဘေးဖက်ကိုလှိမ့်ဆင်းလိုက်ရင်း အမောဖြေနေပါတယ်။မေမိုး စောက်ပတ်ထဲက ကိုကိုသက်လီးတန်ကြီးလည်း ပြွတ်ခနဲကျွတ်ထွက်သွားတာမို့ အထဲကသုက်ရည်တွေရော သွေးစသွေးနလေးတွေပါဆင်းလာတာကိုကြည့်ရင်း နှမြောသလိုလို ဝမ်းနည်းသလို လိုဖြစ်လာတာကြောင့် မေမိုးတစ်ယောက် ကိုကိုသက်ရင်ခွင်ပေါ်ကို မျက်နှာအပ်ပြီး ရှိုက်ငိုမိလိုက်ပါတယ်။
ကိုကိုသက်က မေမိုးကိုယ်လုံးလေးကို အလိုက်သင့်လေးဖက်ထားလိုက်ရင်း ဆံပင်လေးတွေကိုသပ် တင်ပေးလိုက်ကာ ချော့နေပါတယ်။
‘တိတ်တော့နော် မောင်တို့နှစ်ယောက် ဖြစ်လာသမျှရင်ဆိုင်ကြမယ်နော်’
‘မမစိုးပြန်လာလဲ မေမိုးကိုချစ်မှာပေါ့ မေမိုးကိုအရမ်းချစ်သွားပြီ’
‘မောင့်ကိုယုံပါမေမိုးရယ်။မောင်လည်းမေမိုးကိုအရမ်းစွဲနေပြီကွာ’ လို့ပြောက မေမိုးပါးလေးကိုနမ်းလိုက် ပါတယ်။နောက်တော့ ကိုကိုသက်က စားပွဲပေါ်ကတစ်ရှူးနဲ့မေမိုး စောက်ပတ်ကိုသုတ်ပေးကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ် ပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း ပေါင်လေးကားပေးလိုက်ကာ ကိုကိုသက်လုပ်နေသမျှကို မျက်လုံးအဝိုင်းသားလေး နဲ့ကြည့်နေပါတယ်။
ကိုကိုသက်က အိပ်ယာပေါ်ပြန်လှဲလိုက်ရင်း မေမိုးကိုယ်လုံးလေးကိုပါဖက်ကာ သူ့ဘေးကိုလှဲချလိုက်ပါ တယ်။နောက်တော့ မေမိုးနဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်ရင်း နားနေပါတယ်။မေမိုးလည်း အဓိပါယ်မဲ့စွာ ကိုကိုသက်ရင် ဘတ်ကိုပွတ်သပ်နေပါတယ်။ခဏနေတော့ကိုကိုသက်က
‘ကဲ ကလေးရေ နောက်တစ်ခါလောက်ထပ်လုပ်လိုက်ကြအောင်’
‘မောင့်ကိုချစ်လို့သာ မေမိုးအောင့်ခံနေတာ တကယ်နာလို့ပါ’ ပြောမယ့်သာပြောရတာပါ မေမိုးလည်း နောက်ထပ်ဒီအရသာကိုခံစားလိုတာ ငြင်းဆန်ဖို့အင်အားမရှိပါဘူး။
‘အစမို့ပါကွာနောက်တော့ ကောင်းလာမှာနော်’ လို့ပြောရင်းမေမိုး နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ယူပေးလိုက်ပါ တယ်။မေမိုးလည်း မငြင်းဆန်နိုင်တော့ပဲ ကိုကိုသက်ခေါ်ဆောင်ရာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် အရသာထူးကိုခံစား ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုကိုသက်ကလည်း ဖက်ထားတဲ့လက်တစ်ဖက်က မေမိုးနို့လေးတွေကို ဖြစ်ညှစ်ပေးလိုက်တော့ ကာမအရသာတွေတရှိန်းရှိန်းနဲ့ တက်လာပါတော့တယ်။
မေမိုးနှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းနေရာက ကိုကိုသက်ကလွှတ်ပေးလိုက်ရင်း နား နားကိုကပ်ကာ
‘ကိုင်ကြည့်လေ’ လို့ ပြောပြောဆိုဆို မေမိုးလက်ကိုသူ့လက်နဲ့ကိုင်ကာ လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တော့ မေမိုးလည်း မရဲတရဲလေးကိုင်ကြည့်ပါတယ်။အရုပ်အသစ်ရထားတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို မေမိုးကိုကိုသက် လီးကြီးကို နေရာအနှံ့ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ပေးနေပါတယ်။ကိုကိုသက်က
‘ပါးစပ်လေးနဲ့ငုံလိုက်လေ’ လို့ပြောလိုက်တော့ မေမိုးလည်း ကိုကိုသက်လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ ငုံပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုကိုသက်ဆီက အသံလေးကြားလိုက်တော့ မေမိုးလည်း အားရှိသလိုဖြစ်သွားကာ လျှာလေးနဲ့ပါ ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်ကလည်း မေမိုးနို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်နဲ့ခြေပေးနေပါတယ်။နောက်ပြီး ကိုကိုသက်လက်က မေမိုးပေါင်ကြားထဲရောက်လာကာ မေမိုးစောက်ပတ်လေးကို လက်နဲ့ပွတ်ပေးနေပါတယ်။ နောက်တော့ ကိုကိုသက်က တစောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့မေမိုး ကိုယ်လုံးလေးကို သူ့ဖက်ဆွဲလိုက်ကာ မေမိုးပေါင် ကြားထဲ သူ့ခေါင်းဝင်လာရင်း မေမိုးစောက်ပတ်ကိုသူ့လျှာနဲ့ယက်ပေးနေပါတယ်။
မေမိုးလည်း အယက်ခံရတာကောင်းလို့ ပါးစပ်ထဲရောက်နေတဲ့ ကိုကိုသက်လီးကြီးကိုပဲ စိတ်ရှိလက်ရှိ စုပ်ပေးနေမိပါတယ။်ထို့အတူ ကိုကိုသက်ကလည်း မေမိုးစောက်ပတ်လေးကို အဆက်မပြတ်ယက်ပေးနေပါ တယ်။တအောင့်နေတော့ မေမိုးလည်း ကိုကိုသက်ခေါင်းကို ပေါင်ကြားထဲအတင်းညှပ်ထားလိုက်ရင်း တစ်ကိုယ် လုံးတွန့်လိမ်လာကာ တစ်ချီပြီးသွားပါတယ်။
ကိုကိုသက်က မေမိုးကိုဆက်မစုပ်ခိုင်းတော့ပဲ ပက်လက်လေးပြန်လှန်လိုက်ပါတယ်။မေမိုးပေါင်ကြားထဲ ကိုဝင်ကာ ငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ရင်း သူ့လီးကြီးကိုမေမိုးစောက်ပတ်ဝကိုတေ့လိုက်ပါတယ်။ဒီတကြိမ်တော့ မေမိုး ကိုယ်တိုင် ကိုကိုသက်လီးကြီးကိုကိုင်ကာ စောက်ပတ်ဝကို တေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်က ဖြည်းဖြည်း ချင်းစသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ မေမိုးလည်း သိပ်မနာတော့တာကြောင့် နှုတ်ခမ်းလေးကိုကိုက်ကာ ကျိတ်ခံနေပါတယ်။ ကိုကိုသက်က မှန်မှန်လေး အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။
ကိုကိုသက်လည်း ဆောင့်ချက်လေးတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်လာပါတယ်။မေမိုးကိုဆောင့်ပေးနေရင်း လက်က နို့တွေကိုလည်း ဆုပ်နယ်ပေးနေလိုက် နို့ကိုကုန်းစို့လိုက်နဲ့လုပ်ပေးနေပါတယ်။မေမိုးလည်း ကောင်းလွန်းလို့ ကိုကိုသက်ခေါင်းကို ရင်ဘတ်မှာဖိကပ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်က နို့အုံတစ်ခုလုံးကို ပြုတ်ထွက်မတတ်စို့ပေးလေ အရသာကအရမ်းကိုကောင်းလေဖြစ်နေတာမို့
‘အ..အ..အ…အ..မောင် အရမ်းချစ်တယ်’ လို့ပြောကာ ကိုကိုသက်ခေါင်းကို အပေါ်ကိုဆွဲလိုက်ရင်း ကိုကိုသက်နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ကာနမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုသက်လည်း အောက်ပိုင်းကဆောင့်ချက်တွေက တစ်စတစ်စ အရှိန်ရလာပါတယ်။
စောစောကလုပ်တာနဲ့ ပိုကောင်းလာတာမို့ မေမိုးလည်း ကိုကိုသက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း အချက်တိုင်းကို ပြန်ပြန် ကော့ပေးနေမိပါတယ်။
‘အား..ရှီး..ကောင်းလိုက်တာမောင် မရပ်နဲ့ ဒီအတိုင်းဆက်လုပ်ပေး နို့တွေကိုလည်း နယ်ပေး’
ကိုကိုသက် အားထည့်ကာဆောင့်ပေးလိုက်တော့ မေမိုးလည်း ဘယ်နှစ်ခါပြီးသွားမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။တစ်ခါပြီးတိုင်း ကိုကိုသက်ပါးလေးကို တရွှတ်ရွှတ်နဲ့ နမ်းပေးနေလိုက်ပါတယ်။အထဲကိုဝင်လာ တဲ့ကိုကိုသက် လီးကြီးကိုလည်း မေမိုးရှိသမျှအားနဲ့ ညှစ်ပေးနေတာကြောင့် ကိုကိုသက်လည်း ဘယ်လိုမှ တောင့်မခံနိုင်တော့ပဲ ဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ တွန့်တက်သွားကာ မေမိုးစောက်ခေါင်းထဲ ပူခနဲဖြစ်သွားပြီး မေမိုးကိုယ် ပေါ်ကို ကိုကိုသက်ကိုယ်လုံးကြီး ပြုတ်ကျလာပါတော့တယ်။မေမိုးလည်း ကိုကိုသက်ကိုတင်းကျပ်စွာ ဖက်ထား လိုက်မိပါတော့တယ်ရှင်……….။
“ မ မ သက် .....နမ်း ချင် တယ်...ကြိုက် တယ်....ချစ်တယ် ဗျာ..“.။ “ ဟင့် .....ဘာ...ဘာ... လုပ် ..မှာ လဲ .....ကို တိုး......အိ......မမ ဟာ ကို ယက် မ လို့လား.......“ုကျနော် က ဘာ မှ ပြန် မ ဖြေ..။မ မ ရဲ့ စောက် ဖုတ် အုံ ကြီး တ ခု လုံး ကို နမ်း နေ မိ ပြီး ...စောက် ရေ တွေ စို နေ တဲ့..အ ကွဲကြောင်း ပန်း နု ရောင် လေး ကို လျာ နဲ့စ ပြီး ယက် ပြီ....။မ မ သက် မျက် စိ တွေ မှေး စင်း သွား တယ်..။နှုတ် ခမ်း လှ လှ လေး ဖျတ် က နဲ ပွင့်လာ တယ်......။ “အို ကွယ်...ကို တိုးရယ်.........“ ကျ နော့်လျာ က မ မ သက် ရဲ့စောက် ဖုတ် နုတ် ခမ်း နှစ် လွှာ ကြား တိုး ၀င်ပြီး အ ထက် အောက် စုံ ချီ ဆန် ချီ ...လျက် ပေး နေတယ်....။လက် နှစ် ဖက် က မမ သက် နို့နှစ် လုံး ကို တင်း တင်း လေး နယ် ပေး နေ မိ တယ်..။ “ အိ......အင်....အင်....အား...အာ...“ု.မ မ ဟာ ခွေး ငယ် လေး တ ကောင် ညည်း တဲ့အ သံ လို..ညည်း နေ ပြီး ကျနော် ရဲ့ခေါင်း ကို သူ့လက် တွေ နဲ့ ကို ဆုတ် ထား ပါတော့တယ်.....။ အ ကို ၀မ်း ကွဲ မောင် မောင် စိုး သင် ကြား ပေး တာ တွေ နဲ့လိုး ဖူး တဲ့မ ချို ပြ သ ပေး တာ တွေ... ပြန် မြင် ယောင် ကြား ယောင်ပြီး လက် တွေ့အ သုံး ချ နေ မိ ပြီ...။ မ မ သက် က တိုး တိုး လေး...“ကို တိုး...ငယ် ငယ် လေး နဲ့သိပ် တတ် နေ တာ ဘဲ ကွယ်....“လို့ပြော ပါ တယ်...။ ကျ နော် က စ ကား နဲ့ဘာ မှ မ တုံ့ပြန် ပါ ဘူး..။ မ မ သက် စောက် ဖုတ် ကို ကောင်း ကောင်း လျက် ပေး နေ တာ..မ မ သက် မှာ ကာမ အ ရ သာ ကြောင့် ကျနော့်လျာ ယက် လိုက် တိုင်း သူ့ ဖင် ကို ကော့ ကော့ ပြီး နုတ် ခမ်း လေး ဟ ပြီး..အင်း အင်း ..ဟင်း ဟင်း နဲ့ကောင်း နေ ပုံ ပါ..။ မ မ သက် စောက် စိ ကို ဖွဖွ လေး နမ်း ပေး နေ ပါ တယ်..မ မ သက် လဲ မ ကြာ ခင် မှာ ဘဲ...“အားအား.....အိ...အိ...တိုး...တိုး.....ကောင်း............................. ကောင်း...ကောင်း.......အီး အီး.......“.ဆို ပြီး..တ ကိုယ် လုံး တုံ ခါ တွန့်သွား ပြီး......ကာ မ အ ထွတ် အုထိပ် ကို ရောက်( ပြီး) သွား ပါ တော့တယ်..။ ကျ နော် ရဲ့ကာမ စိတ် ဟာ လဲ အ ပြင်း ထန် ဆုံး အ ချိန် ရောက် နေ တာ ကြောင်... မ မ သက် ရဲ့အ ၀တ် မဲ့အ လှ အ ပ တွေ ကို အ နီး ကပ် ကြည့် ပြီး.. လီး ကို တ အား....ကွင်း တိုက်လိုက် တာ နဲ့သုတ် ရေ တွေ မ မ သက် ဘိုက် ပေါ် ကို ပန်း ထွက် ကုန် ပြီး အ လွန် ကောင်း တဲ့ကာ မ အ ရ သာ ကို ရ ရှိလိုက် ပါ တယ်....။ မ မ သက် လဲ အ ချိန် အ တန် ကြာ ငြိမ် နေ ရာ က ထ မိန် ကို ကောက် ၀တ် လိုက် ပြီး ခြေ ရင်း က စောင် ပါး လေး ကို ဆွဲယူ ခြုံ ပါ တယ်..။ကျ နော် လဲ မ မ သက် န ဘေး ၀င် လှဲ အိပ် ..သူ့စောင် ထဲ ၀င် လိုက် တယ်...။မ မ သက် ကို ဖက် ထား လိုက် တယ်..။ ” မ မ...“4of 9
5. “ဟင်...“ “ကောင်း လား...“ “ဘာ ကို မေး တာ လဲ.....“ “ကျနော် နမ်း တာ ကောင်း လား လို့ ...“မ မ သက် က ခေါင်း လေး ငြိမ့်ပြ ပါ တယ်...။ ပြီး တော့ ..“ကို တိုး..လယ် လိုက် တာ..ဒါ တွေ ဘယ် လို တတ် နေ တာ လဲ....“ လို့တိုး တိုး လေ သံ လေး နဲ့ပြောပါ တယ်..။ကျ နော် လဲ ပြန် မ ဖြေ ပါ ဘူး..။မ မ ရဲ့ခါး လေး ကို ဖက် ထား ပြီး မ မ လည် တိုင် ဖွေးဖွေး ကို နမ်း နေ လိုက် ပါ တယ်...။“ကို တိုး.....လူ ကြီး တွေ သိရင် မိုးမီး လောင် မှာ....မ မ သက် အိမ် ပေါ် က ခေါင်း နဲ့ဆင်း ရ လိမ့်မယ်...“ “ဘယ် လို မှ မ သိ နိုင် ပါ ဘူး..မ မ ရယ်....“ “ လူ ရှေ့ ဆို မ မ နဲ့ပုံ မှန် ဘဲ ဆက်ဆံ နော်...“ “အင်း ပါ...“ ကျ နော် လဲ မ မ သက် ရဲ့စ ကား များ နေ တဲ့နှုတ် ခမ်း လေး ကို အ နမ်း နဲ့ပိတ် လိုက် တယ်...။ လူ ပျို လက် ၀က် မြီး...ဆို သ လို လူ ပျို ပေါက် လေး ကျနော် ရဲ့လက် တွေ က မ မ သက် ရဲ့ ပေါင် တန် ရှည် ၂ ချောင်း ကို ပွတ် သပ် နေ ပါ ပြီ...မမ သက် ရဲ့ နှုတ် ခမ်း တွေ ကို စုတ် နမ်းနေ ရင်း ကျနော့် လျာ က မ မ သက် လျာ လေး ကို က လိ နေ ပါ တယ်..။မ မ သက် လက် တွေ က လဲ ကိုယ် လုံး တီး ဖြစ်နေ တဲ့ကျနော့်ကိုယ် နေ ရာ အ နှံ့ ကို ပွတ် သပ် ပေး နေ ရင်း ကျနော့် ကို တုံ့ပြန် နမ်း စုတ် ပါ တယ်..။ ကျနော့် လီး က အ စွမ်း ကုန် ပြန် တောင် မတ် နေ ပြီ ဖြစ်တယ်...။ကျ နော် ရဲ့လက် ချောင်းတွေ က မမ သက် ရဲ့ စောက် ဖုတ် ကို ကိုင် တဲ့အ ခါစောက် ရေ တွေ စို နေတာ ကို သိ လိုက် ရ တာ မို့မ မ သက် လဲ ရာ ဂ စိတ် တွေ ထ ကြွ နေ ပြီ ဆို တာ သေ ချာ ပါ တယ်..။ ဒါ ကြောင့် ..ကျ နော် လဲ မ မ သက်ကို..“မ မ ...ကျနော့်ကို နမ်း ပေး မ လား ဟင်...“ လို့ မေး လိုက် ပါ တယ်.။ “ခု မ မ သက်...ကို တိုး ကို နမ်း......ပြန် နမ်း နေ တာ ဘဲ မ ဟုတ် ဘူး လား..။““ဟင့် အင်း...ဒီ လို နမ်း တာ မ ဟုတ် ဘူး....ကျ နော့်လီး ကြီး ကို နမ်း ဖို့ပြော တာ...မ မ နမ်း ပေး မယ် မ ဟုတ် လား ဟင်...“ “အိ....ကို တိုး က လဲ ကွယ်...မ မ သက် တုခါ မှ နမ်း ဘူး တာ မ ဟုတ် ဘူး.“ “ကျ နော် သင် ပေး မယ်...မ မ သက်....“ကျနော် က မ မ လက် ညှိုး လေး ကို ဆွဲ ယူ ပြီး ပါး စပ် နဲ့ငုံ စုတ် ပြ လိုက် တယ်.....လျာ နဲ့လဲ က လိ ပြလိုက် ပါ တယ်...။“မမ...အဲ လို ကျနော့်လီး ကို ငုံ ပြီး စုတ် ပေး နော်....“ မ မ သက် ကခေါင်း ငြှိမ့်ပြ ပါ တယ်..။ကျနော် လဲ စိတ် ထဲ မှာ ထိတ် က နဲ ၀မ်း သာ သွားရ တယ်..မ မ ကျ နော့်လီး ကို စုတ် တော့မယ် လေ...။ကျ နော် လဲ မ မ နှုတ် ခမ်း လှ လှ လေး ဆီ လီး ကြီး ကို ကပ် ပေး လိုက် တယ်...။မ မ လဲငုံ ပြီး စ စုတ် ပါပြီ...မ မ သက် က လီး တန် ကြီး ကို ရေ ခဲ ချောင်း စုတ် သ လို တ ပြွတ် ပြွတ် စုတ် ပေး နေ တယ်..။ ကျနော် က သူ့လက် ချောင်း လေး ကို ဆွဲ ယူ ပြီး ကျ နော့်ပါးစပ် ထဲ ထဲ့ ..ရှေ့တိုး နောက် ငင် လုပ် ပြ ရ ပြန် တယ်..။မ မ သက် လဲပြ ပေး တဲ့အ တိုင်း အား ရ ပါး ရ စုတ် ပေး နေ ပါ တယ်..။ “ အား...အင်း...ကောင်း လိုက် တာ......အင်....မ မ ..ရယ်......“ မ မ သက် လဲ မှို ပွင့် ကြီး လိူ ကား နေ တဲ့ဒစ် ကြီး ကို လျာ လေး နဲ့ လျက် ပေး လိုက်...တွဲ လောင်း ကျ နေ တဲ့ကျနော့်ရဲ့ဂွေး စိ နှစ် လုံး ကို လျက် ပေးလိုက်..လုပ် ပေး ပါ တယ်...။ပြီး တော့လီး တန် တ ဆုံး ငုံ ထား လိုက် ပြီး လျာ လေး နဲ့လီး ကြီး ကိုပွတ် လှိမ့် ပေး တာ ကျ နော် လဲ အ ရ သာ ရှိ လွန်း လို့တဟင်း ဟင်း ညည်း ငြူ နေ ရ ပါ တယ်..။ ကျ နော် လဲ မ မ သက် စုတ် ပေး နေ တုံး မ မ သက် ရဲ့နို့တင်း တင်း လှ လှလေး နှစ် လုံး ကို ညင် ညင် သာ သာ လေးပွတ် သပ် အ ရ သာ ခံ နေ မိ ပါ တယ်..။ မ မ သက် ရဲ့အ စုတ် ကောင်း လွန်း လို့ကျ နေိာ လဲ “ပြီး“ ကာ နီး ဖြစ် လာ ရ တာ မို့မ မ သက် နှုတ် ခမ်း ထဲ က ကျနော့်လီး ကြီး ကို ထုတ် လိုက် ပါ တယ်.။ “ ကောင်း လား ဟင်...ကို တိုး..“ “သိပ် ကောင်း တာ ဘဲ..မ မ “ ကျ နော် လဲ မ မ သက် ပေါင် တန် တွေ ကြား က အ မွှေး ရေးေ၇း နဲ့စောက် ဖုတ် ကြီး ကို ငုံ့ပြီး နမ်း လိုက် ပါ တယ်...။ “အိ“....မမ သက် စောက် ဖုတ် မှာ အုရေ တွေ စို နေ တာ တွေ့ရ တယ်..။ အ ကွဲ ကြောင်း ကြီး တ လျောက် ကို လျာ နဲ့ အ ပေါ် က အောက် ဖွ ဖွ လေး ယက် လိုက် တယ်..။အင်....မ မ သက် တွန့်သွားတယ်..။ဖျတ် က နဲ...အ ရ သာ ဖူး စောက် စိ လေး ကို ဖမ်း ငုံ ပြီး လျာ ဖျား လေး နဲ့လျက် ပေး လိုက်...အ သာ လေး စုတ် ပေး လိုက်..လုပ် ပေး တော့ ..မ မ သက်လူး ခါ နေ တယ်...။ မ မ သက် ရဲ့စောက် ဖုတ် ကို စုံ ချီ ဆန် ချီ လျာ နဲ့ယက် ပေး နေ ရာ က စောက် ဖုတ် နှုတ် ခမ်း သား တွေ ကို လက် မ နဲ့လက် ညှိုး သုံး ပြီးဖြဲ...အ ထဲ ကို လျာထိုး ထဲ့ပြီး မွှေ ပေး တယ်..။“ အာ...အင်....ဟင့် ...ဟင့် .......အင့် .....“မ မ သက် ကျ နော့်ဆံ ပင် တွေ ကို တ အား ဆွဲ ဆုတ် ကိုင် ပြီး... ဖင် တွေကို...ကော့ကော့ပေး နေ ပြီ...။မ မ ရဲ့ဖင် ၂ လုံး ကို ဆုတ် ကိုင် ပြီး..စောက် ဖုတ် ကို အ ရမ်း ယက် နေ မိ ပါ တယ်..။ မ မ သက် အ ရမ်း ကောင်း နြေ့ပီ.......“ကို...ကို တိုး....... မ မ .. မမ....အ နေ ရ ခက် ..နေ ပြီ......ကွယ်... မ မ လို ချင် နေ ပြီ.....“မ မ သက် အ သံ တုံ တုံ လေး နဲ့ပြော တယ်..။“ မ မ အ ရမ်း ယားနေ လား ဟင်...“ မ မ သက် က မ ဖြေ....“ဖြေ လေ..မ မ ယား နေ လား....““အင်း အင်း...“ပါး စပ် က ဖြေ..““အင်း ပါ...ယား လှ ပြီ.....ပေး ပါ တော့ ....“ “ဘာ ကို ပေး ရ မှာ လဲ....““အို ကွယ်...““ပြော...ဘာ ပေး ရ မှာ လဲ...““အိ....ခက် တော့တာ ဘဲ...လီး......လီး ကြီး....မင်း လီး ကြီး က်ု ..ပေး ပါ တော့ ...“ုကျ နော် လဲ မ မ သက် စောက် ဖုတ် နတ် ခမ်း သား တ လျောက် ကို ဒစ် ဖျား နဲ့ အ ပေါ် အောက် ဆွဲ ပွတ် တယ်..မ မ သက် တ ဟင်း ဟင်း နဲ့လူးနေ တယ်...။ “ထဲ.့...ထဲ့ ....ပါ တော့ ..“မ မ သက် စောက် ဖုတ် က အ ရေ တွေ ရွှဲ နေ တာ အ ရမ်း ပါ..ဒါ ကြောင့်ကျ နော် လဲ လီး ကို မ မ စောက် ဖုတ် နှုတ် ခမ်းလွှာ ကြား ကို အ သာထိုး လိုက် ပါ တယ်..။တင်း တင်း ကျပ် ကျပိ လေး ဒစ် လုံး ကြီးတိုး ၀င် သွားတယ်..ကျ နော် လဲရှေ့တိုး နောက် ငင် ဖြေး ဖြေး ချင်း ဒစ် ကို အသွင်း အ ထုတ် ..လုပ် ပေး တာ.. မ မ သက် လဲ တ အင်း အင်း နဲ့ပါး စပ် လေး ဖွင့်ဟ ပြီး..ဖီ လင် တွေ တက် နေ ပါ တယ်..။ “ နာ...နာ တယ်..ဖြေးဖြေး.....အိ....“...ကျ နော် လဲတ ထစ် ချင်း...ဖြေး ဖြေး လေး ထိုး ထဲ့လိူး ပါ တယ်...။တော် တော် လေး အို ကေ လာ မှ ဖြေး ဖြေး လေး ချော့ပြီး ထိုး သွင်း ပြီး လိူုးကြည့်တယ်..။ တော် တော် လေး လိုး ပြီး....“မ မ နာ သေး လား...“ “ရ တယ်...လုပ်..လုပ်..“မ မ သက် စောက် ဖုတ် က တင်း ကျပ် ပြီး ...သိပ် ကောင်း တာ မို့တဖြေး ဖြေး နဲ့ လိုး ချက် က မြန် လာ တယ်...။ “ မ မ ... အို ကေ လား ဟင်...“5of 9
6. “အင်း.....အင်း....“ “ ကောင်း လား...“ “ကောင်း တယ်...သိပ် ကောင်း....“ပါး စပ် က မေး နေ တုံး ကျ နော် လီး က လဲမှန် မှန် လေး လိုး နေ တယ် ..။ တ ချက် လိုး လိုက် တိုင်း တင်း က နဲ အ ရ သာ က ကောင်း လှ တယ်..။ စီး စီး ပိုင် ပိုင်လိုး ရ တာ အ ရမ်း ကောင်း လွန်း နေ တာ မို့မ မ သက် နို့နှစ် လုံး ကို ဆုတိ ကိုင် ပြီး ဖင် ကော့ပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုး ပေး လိုက် ပါ တယ်..။ အင်.အင်.....ကောင်း...ကောင်း........ကောင်း တယ်....ကို တိုး ရယ်......မမ သက်..ဖင် ကို ကော့ကော့ပေး တယ်..။ မ မ သက်..မ ရှက် တော့ ...။“ဆောင့်ဆောင့်....ဆောင့်ပေး ဆောင့်ပေး....လို့တောင်း ဆို ပါ တယ်..။ ကျ နော် မ မ သက် စောက် ဖုတ် ကို အ ရမ်း သ ဘော ကျ သွား တာ ဘဲ...။ဒါ ကြောင့်တ အား ဘဲဆောင့်ဆောင့်လိုး ပါ တော့တယ်....။ မ မ သက် ခြေ ထောက် ကို ပ ခုံး ပေါ် တင်..ဖင် တွေ ကိုဆွဲကိုင် ပြီး..ကော့ကော့လိုး ပေး လိုက် ပါ တယ်...။.မ မ သက်က ကျ နော့်ကျော ကို တ အား ဖက် ထား ပြီး အ ချက် ၃၀ လောက် ဆောင့်အ ပြီး....တ အီး အီး ညည်း ရင်း “ပြီး ခြင်း“ ကို ရောက် ရှိ သွား ပါ တော့တယ်..။ကျနော် လဲ ဆက် တိုက်ထပ် လိုး ဆောင့် တာ မ ကြာခင် မှာ ဘဲ မ မ သက် စောက် ဖုတ် ထဲ သုတ် ရေ တွေ ပန်း ထုတ် ပြီး.. ပြီး သွား ရ ပါ တယ်...။ နောက် တ နေ့ ...လူ အ လစ် မ မ သက် ကို စ တို ခန်း လေး ထဲ ဆွဲ သွင်း ပြီး..ခါး သိမ် လေး က နေ ဆွဲ ဖက်....နှုတ် ခမ်း စု စု လေးကို ဖိ ကပ် စုတ် လိုက် တယ်..။ “ချစ် တယ်...မ မ ရယ်....““မ မ ရော ဘဲ...“မ မ သက် က တုံ တုံ ရီ ရီ နဲ့ပြန် ပြော ပြီး ကျနော့်ကို ပြန် ဖက် ထား တယ်..။ “ည က ကောင်း လား ဟင် မ မ သက်...“မ မ ရဲ့ဖင် ၂ လုံး ကို ဆုတ် နယ် ရင်း မေးတော့မ မ က ခေါင်း ငြှိမ့်အ ဖြေ ပေး ပါ တယ်..။ကျ နော့်လီး က အ စွမ်း ကုန် တောင် မတ် နေ ပြီ....။ မ မ သက် လက် ကို ဆွဲ ယူ ပြီး လီး တန် ကြီး ထဲ့ပေး ပြီးကိုင် ခိုင်း တာ မ မ သက် လဲ ဖွ ဖွ လေး ပွတ် သပ် ပေး ပါ တယ်...။ အဲ ဒီ အ ချိန် မှာ ရုတ် တ ရက် စ တို ခန်း ဖက် ကို လျှောက် လာ တဲ့ခြေ သံ ကြား လိုက် ရ လို့မမ သက် နဲ့ကျ နော် အ သာ ငြိမ် နေ လိုက် ကြ တယ်..။ မ မ သက် ရဲ့ညီ မ မေ အေး လွင် ပါ..။ မ မ သက် ရဲ့နာ မယ် ကို ခေါ် ရင်း လိုက် ရှာ နေ တာ မို့မ မ သက် လဲ “ နောက် မှ...နော်“ လို့တိုးတိုး ပြော ပြီး ပြေးထွက် သွား ပါ တော့တယ်..။ ကျ နော် ဘဲ တ ယောက် ထဲ လီး ကြီး တောင် မတ် ပြီး ကျန် နေ ခဲ့တာ ပေါ့ ...။ တ နေ့လုံး လူ မ လစ် တော့တာ မို့မ မ သက် နဲ့ကျ နော် မ တွေ့ဖြစ် ဘူး..။ ည နေ စောင်း ရောက် တော့ကျ နော် သူ ငယ် ချင်း အိမ် က ပြန် လာတော့မ မ သက် ကို မ တွေ့ဘူး.....မေ အေး လွင် ကို မေး ကြည့်တော့မ မ သက် နဲ့ကျ နော့်အ မေ .....မော် လ မြိုင် က မ မ သက် ရဲ့အ မေ..ဆေး ရုံ တက် ရလို့အ ရေး တ ကြီး လိုက် သွား တယ် လို့သိ ရ တယ်..။ မေ အေး လွင် က တော့ကျောင်း မ ပျက် ချင် လို့ ...သူ တို့အ မေ က လဲ သိပ် စိတ် ပူ စ ရာ မ လို လို့ လိုက် မ သွား ဘူး လို့ ပြော တယ်..။ ည ဖက် ရောက် တော့မ မ သက် နဲ့ဖြစ် ပျက် ခဲ့တာ တွေ မြင် ယောင် သ တိ ရ ပြီး လီး ကြီး တ အား တောင် ပြီး အိပ် လို့မ ရ ဘူး..။ သုံး ရက် ကြာ တော့ကျ နော့်အ မေ မော် လ မြိုင် က ပြန် လာ တယ်..။ မ မ သက် တော့ပြန် လိုက် မ လာ သေးဘူး..။ကျ နော် စိတ် ညစ် သွား တယ်..။ နေ့လည် ဖက် မှာ ကျ နော် ကျောင်း က ပြန် ရောက် တော့အိမ် မှာ ဘယ် သူ မှ မ ရှိ ကြ..။ထ မင်း ချက် တဲ့အ ဒေါ် ကြီးက တော့ထုံး စံ အ တိုင်း အ လုပ် လူပ် စ ရာ မ ရှိ လို့သူ့အ ခန်း လေး ထဲ မှာ အိပ် နေ မယ် ထင် တာ ဘဲ..။မီး ဖို ထဲ မှာ မ တွေ့ဘူး...။ကျ နော် လဲ အ ဝေး ထိန်းခ လုပ် နဲ့မောင်း ရ တဲ့က စား စ ရာ ကား လေး မှာ ဘက် ထ ရီ ကုန် နေ တာ အ သစ် လဲ တယ်..။အိမ် အ ပေါ် ထပ် မှာ ပေါ့ ..။ “ အပေါ် ထပ် ကို ရေ မ တက် ဘူး..အောက် ဆင်း ချိုး ရ မယ်..“ မေ အေး လွင် အ သံ ကို ကျော ဖက် က ကြား လိုက် ရ တယ်..။အ မှတ် တ မဲ့လှည့် ကြည့်လိုက် မိ တယ်..။အား ပါး....သ တိ မ ထား မိ တာ ကြာ ပြီ....မေ အေး လွင်..ထ မိန် ရင် လျား နဲ့သူ့အ ခန်း က ထွက် လာ တယ်..။ ထ မိန် က ဟောင်း နွမ်းလွန်း တယ်..။ဖြူ ၀င်း တဲ့မေ အေး လွင် ရဲ့နို့တွေ က ရင် လျား ထား တဲ့ထ မိန် အ ပေါ် က လျံ ထွက် နေ ပြီး ခါး သေး သေး အောက် က ၀ိုင်း ကား တဲ့ဖင် ကြီးတွေ က လဲ လမ်း လျှောက် လိုက် တိုင်း ခါ နေ တယ်..။ “မော် တာ ပျက် နေ တာ..ကိူ မောင် မောင် စိုး ပြင် တဲ့လူ သွား ခေါ် နေ တယ်..“မေ အေး လွင် ကျ နော့် ဘေး က ဖြတ် လျှောက် သွား ရင်း ပြော ပါ တယ်..။ ဒါ ပေ မဲ့မေ အေး လွင် ပြုံး စိ စိ နဲ့ကျ နော့်ကို စ တဲ့အ နေ နဲ့ဖျတ် က နဲ ဆွဲ ဆိတ် လိုက် ပါ တယ်..။ ကျ နော် လဲ က စားစ ရာ ကား လေး ထဲ ဘက်ထ ရီ ထဲ့ေ န ချိန် မို့ရုတ် တ ရက် ဘာ မှ မ တုံ့ပြန် နိူင် ဘူး..။မေ အေး လွင် က တ ခစ် ခစ် ရီ ပြီး လှေ ခါး က နေ ဆင်း ပြေး တယ်..။ဖင် ကြီး တွေ ကရမ်း ခါ နေတာ တွေ့လိုက် ရ တယ်..။ “ သိ ကြ ရော ပေါ့ ..“ကျ နော် လဲ လှေ ခါး က ပြေး ဆင်း ပြီး မေ အေး လွင် နောက် ကို လိုက် တယ်..။မေ အေး လွင် က ရီ ပြီး....အောက်ထပ် က ရေ ချိုး ခန်း လေး ထဲ ၀င် ပြေး သွား ပါ တယ်..။ ဒီ အ ချိန် မှာ ဘဲ လှေ ခါး အောက် ဆုံး နံ ရံ မှာ ရှိ နေ တဲ့တယ် လီ ဖုံး က မြည် လာ တာ ကြောင့်ကျ နော်လဲ ကိုင် လိုက် ရ တယ်..။ ကျ နော့်အ မေ ကို ပြော ချင် တဲ့ဖုံး ပါ..။မ ရှိ ကြောင်း ပြော ပြီး ဖုံး ပြန် ချ တင် ပြီး မှ မေ အေး လွင် ဆီ ပြေး လိုက် တော့ရေ ချိုး ခန်း ထဲဝင် သွား ပြီး နေ ပြီ လေ..။ရေ ချိုး ခန်း တံ ခါး ကို ဆွဲ ဖွင့်လိုက် ပါ တယ်..။ ငါ့ကို ဆိတ် သွား တဲ့လူ...တွေ့ကြေ၇ာ ပေါ့ ..“ ဟာ......တံ ခါး က ဂျက် ထိုး ထား ပုံ ရပေ မဲ့ဂျက် က က ရော် က မယ် နဲ့ ..ကျ နော် ဆွဲ ဖွင့်လိုက် တော့ပွင့်ထွက် သွား တယ်...။ အို ....ကို တိုး.......မေ အေး လွင်....ကို အ ၀တ် မ ပါ ဘဲ တုံး လုံး ကြီး တွေ့လိုက် ရ ပါ တယ်...။ သူ မ ထ မိန် နွမ်း လေး က တန်း ပေါ် မှာ လှမ်း ထား ပြီး ဖြစ် နေ တယ်..။ဖြူ ၀င်း တဲ့နို့ ကြီး တွေ ကတင်း မာ ကြီး အောက် ကို တွဲ မ ကျ သေး..ကော့ကော့ကြီး တွေ ပါ....မျက် နှာ ချင်း ဆိုင် မို့ပေါင် တန် ဖြူ ဖြူ တွေ နဲ့ဆီး ခုံ မို့မို့ဖေါင်း ဖေါင်း ကြီးကို လဲ တပ် မက် ဖွယ် တွေ့လိုက် ရ တယ်..။အ မွှေး နု နု လေး တွေ ခပ် ပါး ပါး ၇ှိ နေ တဲ့မေ အေး လွင့်စောက် ပတ် ကြီး ကို မျက် လုံး မ ခွါ နိုင် အောင် ဘဲ..။ မေ အေး လွင် က လက် ၂ ဖက် နဲ့နို့တွေ ကို ကာ လိုက် တယ်..။ပြီး မှ အောက် ဖက် ကို သ တိ ရ သွား ပြီး စောက် ပတ် ကို လက် ၀ါး တ ဖက် နဲ့ကာ ပြန်တယ်..။ “ကို တိုး.....ထွက်..ထွက်...သွား ပါ..“ထ မိန် ကို သ တိ ရ သွား ပြီး လှည့်ပြီး ဆွဲ ယူ တယ်..။ကျော ခိုင်း လိုက် တော့ဖင် ကား ကား ကြီး တွေ ကို လှည့်ပြလိုက် သ လို ဖြစ် သွား တယ်..။ဖင် ကြီး နှစ် လုံး က လုံး ထစ် ဖု ထွက် နေ တယ်..။ ကျ နေိာ လဲ မေ အေး လွင် ထ မိန် ကို ခေါင်း ပေါ် က စွပ် နေ တုံး သူ မ ရဲ့ဖင်တ လုံး ကို ဆွဲ ဆိတ် လိုက် ပါ တယ်..။ အို့ ...ဘာ လုပ် တာ လဲ..။ “ပြန် ဆိတ် တာ လေ...““အိုး..ကို တိုး မ ကောင်း ဘူး..“မေ အေး လွင် ထ မိန် ကို ရင် လျား ရင်းနှတ် ခမ်း လေး စူ ပြီး ပြော တယ်..။ မေ အေး...နင် သိပ် လှ တာ ဘဲ.....ဟယ်..။6of 9
7. အ ရမ်း စွတ် ၀င် လာ တာ ဘဲ...ဟွန်း....ရှက် လိုက် တာ...ကဲ..ပါ..ထွက်...ပါ တော့ ...သူ များ တွေ မြင် ရင် ခက် ကုန် မယ်..“အ တင်း တွန်း လွှတ် တာ နဲ့ကျ နော် လဲ ရေ ချိုး ခန်း ထဲ က အ ပြင် ပြန် ရောက် သွား ပါ တယ်..။ကျ နော့်လီး က တော့အ ဖြစ် အ ပျက် ကြောင့် ..မတ် မတ် ကြီးတောင် နေ ပါ တယ်..။ ကျ နော် လဲ မ ယောင် မ လည် နဲ့မေ အေး လွင် ရေ ချိုး ခန်း က ပြန် အ ထွကိ ကို စောင့်နေ မိ တယ်..။ ရေ တ ဘွမ်း ဘွမ်း ချိုး သံ ကြား ရ တယ်..။ရေစည် ပိုင်း ထဲ က ခပ် ချိုး တာ ပါ..။ ချောက် က နဲ တံ ခါး ပွင့်သွား ပြီး မေ အေး လွင် ထ မိန် ရင် လျား နဲ့ထွက် လာ ပြီ...။ထ မိန် က ရေ စို နေ တယ်..အင်း..သ တိထား မိ လိုက် တယ်..မေ အေး လွင်...မျက် နှာ သုတ် ပ ၀ါ ပါ ခဲ့တာ ကို မ တွေ့ဘူး ဘဲ...။ထ မိန် က စို နေ တာ မို့အ သား နဲ့ကပ် နေ တာ ကိုယ် လုံး အ လှ ကိုထင်း ထင်း ကြီး ပေါ် စေ တာ ပေါ့် ..။ ဟ.ယ်...ကို တိုး...ဘာ ကြည့်နေ တာ လဲ..... စူး စူး ၀ါး ၀ါး..ကြည့်နေ တာ တွေ့သွား တာ ကြောင့်မေ အေး လွင် ရှက် သွား ပုံ နဲ့ရင် ဘတ် ကို လက် နဲ့ကာ လိုက် ပြီး လှေ ခါး ပေါ် ကို ပြေး တက် ပါ တယ်..။ဖင်ကြီး တွေ က တ ဆတ် ဆတ် တုံ ခါ နေ တာ ကျ နော့်စိတ် ကို ဘ လောင် ဆူ စေ တယ်....။အင်း..မေ အေး လွင် ကို လိုး လိုက် ရ ရင် အီ ဆိမ့်နေ မှာ ဘဲ....။ ဒီ နောက် ပိုင်း...မေ အေး လွင် ကျ နော့်ကို ရှောင် နေ တယ်..။တော် တော် ရှက် သွား ပုံ ရ တယ်..။ ကျ နော် လဲ တွေ့လိုက် ရ တဲ့ မေ အေး ရဲ့ကိုယ် လုံးတီး အ လှ ကို မျက် စိ ထဲ က မ ဖျောက် နိုင်..။ထပ် ပြီး တွေ့ချင် နေ တာ ... တွေ့နိုင် ဖို့ ..အ ခွင့်အ ရေး ကို ရှာ နေ မိ တယ်..။ဒီ နေ့ ...လီး က လဲ တ အားတောင်.....လိုး ချင် တဲ့စိတ် က တ ဖွါး ဖွါး ဖြစ် နေ တယ်....ည ၇ှစ် နာ ရီ လောက် ရှိ ပြီ.. မ အောင့်အီး နိုင် တော့တဲ့စိတ် ကြောင့် ..မ မ သက် နဲ့မေ အေး လွင် တို့အိပ် ခန်း ဖက် ကို ထွက် ခဲ့ တယ်..။အ ခန်း တံ ခါး ပိတ် မ ထား .။ မီး ကတော့လင်း နေ တယ်..။မေ အေး လွင် မ ရှိ ပါ လား..။ ဘယ် သွား ပါ လိမ့် ...။အိမ် သာ များ သွား လား..။ အိမ် သာ ရှိ ရာ အိမ် အ နောက် ဖက် ဆီ ကို ရောက် တော့ အိမ် သာ ထဲ က မီး လင်း နေ တာ တွေ့လိုက် ရ တယ်..။မေ အေး လွငိ ဘဲ ဖြစ် မယ်...။ ဘေး က စ တို ခန်း လေး ထဲ ၀င် လိုက် တယ်..။ မ မ သက် ကို ချောင်း ဘူး တဲ့အ ပေါက် လေး က နေ ချောင်း ကြည့်လိုက် မိ တယ်..။ဟုတ် ပါ တယ်..မေ အေး လွင် အိမ် သာ ခွက် မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ပြီး စာ အုပ် ခပ် နွမ်း နွမ်း လေး ကို ဖွင့်ဖတ် နေ တယ်..။ ထ မိန် ကို ခါး အ ထိ လှန် တင် ထား တာ ကြောင့် မေ အေး လွင် ရဲ့ပေါင် တန် ဖွေး ဖွေး နဲ့ အ မွှေး ရေး ရေး နဲ့စောက် ဖုတ် ကြီး ကို မြင် နေ ရ ပါ တယ်..။စောက် ဖုတ် ကြီး က ဖူးဖူး ကြီး အ ကွဲ ကြောင်း နီ ညို ညိုကြီး နဲ့အ ရေ တွေ စို နေ တယ်..။ဒီ အ ခိုက် မှာ ဘဲ မေ အေး လွင် ရဲ့လက် တ ဖက် က စောက် ဖုတ် ဆီ ကို ရောက် လာ ပြီး စောက် ပတ် နှုတ် ခမ်း သား တွေ ကိုပွတ် နေ ပြီ....အော်..ကျ နော် သ ဘော ပေါက် သွား ပြီ... မေ အေး လွင်...နှာ စာ အုပ် ဖတ် နေ တာ ကိုး.....မေ အေး လွင် နှုတ် ခမ်း လေး တွေ ဟ လာ ပြီး တ ဟင်းဟင်း....တိုးတိုး လေး ညည်း နေ တယ်..။ ကာ မစိတ် တွေ ကြွ နေ တာ ကို တွေ့လိုက် ရ တာ ကျ နော် လီး လဲ အ ကြော အ ပြိုင်း ပြိုင်း နဲ့အ စွမ်း ကုန် တောင် မတ် နေပြီး ခု ဘဲ ပြေး ၀င် ပြီး တက် လိုး ပစ် လိုက်ချင် နေ ပါ တယ်..။ မေ အေး လွင် လက် ချောင်း လေး တွေ က စောက် ပတ် အ ကွဲ ထဲ ထိုး နှိုက် က လိ နေ ပါ တယ်..။ စာ အုပ် တ အုပ် လုံး ဖတ် ပြီး သွား တော့ မျက် စိ လေး ပိတ် ပြီး စောက် ဖုတ် ထဲ လက် ချောင်း တွေ ထိုး ဆွ က လိ နေ တယ်..။ကျနော် လဲ လီး ကို တ အား ကွင်း တိုက် နေ ရ တယ်..။ တော် တော် ကြာ ပြီး မှ မေ အေး လွင် စောက် ဖုတ် ကို ရေ ဆေး လိုက် ပြီး ထ ရပ် လိုက် တယ်..။ထ မိန် ကို ပြင် ၀တ် နေ တယ်..။ ကျ နော် လဲ စ တို ခန်း ထဲက ထွက် လိုက် ပြီး အ မှောင် ထဲ က လီး ကြီး တောင် ပြီး စောင့်နေ မိ တယ်..။ချောက်....ရေ ချိုး ခန်း တံ ခါး ပွင့်ပြီး မေ အေး လွင် ထွက် လာ တယ်..။ ကျ နော် က“မေ အေး“ လို့ခေါ် လိုက် တာ သူ လန့်ပြီး တုန် သွား တယ်..။ “အ မေ ...“့သူ့လက် ထဲ က စာ အုပ် ကို ဆွဲ ယူ လိုက် တယ်..။“ ဟယ်.....အိ.....“ု“ ဘာ စာ အုပ် လဲ...ပြ စမ်း...““အိ...ကို တိုး....ပေး...ပြန် ပေး....မ လုပ် နဲ့ ...“ု“ငါ ကြည့်မယ်....ဘာ စာ အုပ် လဲ ဆို တာ..“ကျ နော် က စာ အုပ် ကို တီ ရှပ် လည် ပင်း ပေါက် က နေ အ ထဲ ထဲ့လိုက် ပြီး ကျ နော့်အိပ် ခန်း ဆီ ကို ပြေး သွား ပါ တယ်...။မေ အေး အ နောက် က ပြေး လိုက်လာ တယ်....။“ပြန် ပေး...မ ကြည့်နဲ ......“ ကျ နော် က အ ကြံ သ မား ဘဲ..။ကျ နော့်အိပ် ခန်း တံ ခါး ကို အ ထဲ က ဂျက် ထိုး ပိတ် လိုက် တယ်..။မေ အေး မျက် နှုာ လေး ရဲ နီ နေ တယ်..။ စာ အုပ် ကို အ တင်း ပြန် ယူ ချင် ဇော နဲ့ကျ နော့် တီ ရှပ် ကို ဆွဲ လှန် တယ်..။ဒီ မှာ ဘဲ ကျ နော့်ပု ဆိုး က ဖြုတ် က နဲ ကျွတ် ကျ သွား တယ်..။အိုး.... အ ကြော အ ပြိုင်း ပြိုင်း နဲ့လီး ကြီး က ဒစ် ကား ကား ကြီး နဲ့ဘွား က နဲ ပေါ် လာ တယ်..။မေ အေး မျက် လုံး တွေ လီး ကြီး ကို စိုက် ကြည့်နေ ပြီး.....အ ကြီးကြီး ဘဲ..လို့အ သံ ထွက် သွား တယ်..။ “ မေ အေး..နင် ကိုင် ကြည့်ပါ လား..“ ကျ နော် လဲ မေ အေး လက် ကို ဆွဲ ပြီး လီး ကို ထဲ့ပေး လိုက် တယ်..။“အိ...ဟင့်ုအင်း....ဟင့်အင်း......စာ အုပ် ပြန် ပေး ပါ...ဆို ပြီး ငြင်း ပေ မဲ့ကျ နော် က မေ အေး ခါး လေး ကို ဆွဲ ဖက် ပြီး နှုတ် ခမ်း အိ အိ လေး ကို စုတ် လိုက် တယ်..။ အင့်..... ကျ နော့်လက် က လဲ မေ အေး လက် ထဲ ကို လီး ကို ထဲ့ပေး တယ်..။မေ အေး က တွန်း ခွါ ဖို့ကြိုး စားး ပေ မဲ့ကျ နော် က အ ခွင့်မ ပေး..။မေ အေး လည်တိုင် ကို လဲ နမ်း...ဖင် ကြီး တွေ ကို လဲ ဖျစ် နယ် ပွတ် သပ်...ဒ လ ကြမ်း တိုက် စစ် ဆင် နေ တယ်..။ မေ အေး လဲ တ အင်း အင်း နဲ့လူး လွန့်နေ တယ်..။ မေ အေးကျ နော် ရဲ့ကု တင် စောင်း မှာ ပက် လက် ကျ သွား တော့ကျ နော် က အ ပေါ် ကဖိ ခွ လိုက် ပြီး...ဘယ် လက် နဲ့မေ အေး ဘ လောက်စ် လေး ရဲ့နှိပ် ကြယ် သီးလေး တွေ ကို တ ထောက် ထောက် နဲ့ဆွဲ ဖြုတ် ပစ် လိုက် တာ ဘ ရာ စီ ယာ မ ပါ တာ ကြောင့် နို့ဝင်း ၀င်း အိ အိ ကြီး တွေ ဘွား က နဲ ပေါ် လာ တယ်..။မေအေးနှုတ် ခမ်း တွေ ကြားေ၇ာက် နေ တဲ့ကျ နော့်နှုတ် ခမ်း တွေ က နို့ကြီး တွေ ဆီ ရောက် သွား တယ်..။နို့ကြီး တွေ ကို နမ်း လိုက် နို့သီး ခေါင်း လေး ကို စို့ လိုက်.....လက် တွေ က မြန် တယ်...မေ အေး ထ မိန် လေး ကို အောက် ဆွဲ ချ..ချွတ် ပစ် လိုက် တယ်..။ အ စ မှာ ရုန်း ကန် ငြင်း နေ တဲ့မေ အေး တ ဟင့်ဟင့်နဲ့မ ရုံး တော့ ..။ “၇ှက် တယ် ကို တိုး..ရယ်..“ တဲ့ ..ကျ နော့်လီး ကြီး က မေ အေး ပေါင် တန် တွေ ကို ပွတ် နေ တယ်..။ မေ အေး...နင့်စောက် ပတ် က သိပ် လှ တာ ဘဲ....အိ....ဘာ တွေ လာ ပြော နေ တာ လဲ...“ တ ကယ် ပါ မေ အေး ရယ်...ငါ...ငါ.....ငါ နမ်း ပါ ရ စေ ဟာ...“ုကျ နော် လဲ မေ အေး ပေါင် နှစ် ချောင်း ကြား ခေါင်း အပ် လိုက် ပြီး....စောက် ဖုတ် ဖေါင်း ဖေါင်း ကြီး ကို မျက် နှာ တ ခု လုံး နဲ့လူး လှိမ့်ပြီး နမ်း လိုက် တော့မေအေး ....ဖင် တွေ ကော့ပျံ လာ တယ်..။ မ လုပ် နဲ့ ...မ လုပ် နဲ့ ....ငြင်း နေ တဲ အ ချိန်..ကျ နော့်လျာ က အ ကွဲ ကြောင်း နီ နီ ကြီး ကို စ ပြီး ယက် ပေး နေ7of 9
8. ပြီ...။အိ..၇ှီး.....အိ......ကို တိုး.....ုကျ နော့်လက် တွေ က သူ့ဖင် အောက် ထဲ ထိုး သွင်း ပြီး ဆုတ် ကိုင် လိုက် ပြီး စောက် ပတ် ကြီး ကို အ ပေါ် အောက် ယက် ပေး နေ ပါ တယ်..။...အို့ ....အင်......ဟင်း ဟင်း.........အာ့ ....အာ့ .......အင်း...မေ အေး ကျ နော့်ဆံ ပင် တွေ ကို ဆုတ် ထား. ကိုင် ထား ပြီး ညည်း နေ တယ်...။အ တန် ကြာ ဖင် ကြီး တွေ ကို ဖျစ် ညှစ် ဆုတ် ကိုင် နေ တဲ့ကျ နော့်၇ဲ့လက်တွေ က မေ အေး ရဲ့နို့လှ လှ ကြီး တွေ ဆီ ရောက် သွား ရ ပြန် တယ်..။ နို့သီး ခေါင်း လေး တွေ ကို ကျ နော့်လကိ ချောင်း လေး တွေ နဲ့ဖွ ဖွ လေး ပွတ် သပ်က စား ပေး တယ်..။နို့ကြီး တွေ ကို ကောင်း ကောင်း ကြီး နယ် လိုက် ဆုတ် လိုက်.. အ ရ သာ ရှိ လိုတ် တာ...။ စောက် ဖုတ် နှုတ် ခမ်း တွေ ကြား ထဲ လျာ ထိုး ထဲ့ပြီး မွှေ ပေး နေ တော့မေ အေး တ ဆတ် ဆတ် တုံ......တ ဖျတ် ဖျတ် ခါ နေ ပြီ...။မေ အေး ဖင် ကြီးတွေ ခါ ရမ်း နေ ပြီ.....ဖျတ် က နဲ စောက် စိ လေး ကို ပါ ငုံ စုတ် ပေး မိ ပြန် တော့မေ အေး နုတ် ဖျား က “ ကို ကို......မေ အေး ..မေ အေး......ကောင်း လိုက် တာ.......တဲ့ ...။ကျ နော် လဲ စောက် ဖုတ် ယက် ပေး နေ ရာ က နေ..မေ အေး ပေါင် တန် တွေ ကို ကား ဟ လိုက် ပြီး လီး ကြီး ကို..စောက်ဖုတ် အ ကွဲ အ တိုင်း စုံ ချီ ဆန် ချီ...ပွတ်တိုက် ပေး လိုက် တယ်..။ မေ အေး တ ဟင့် ဟင့်နဲ့ကော့လူး နေ ပြီ.. ကျ နော့်ဒစ် ကားကား ကြီး က မေ အေး စောက် စိ လေး ကို ထိုး က လော် မိ သွား တာ အကြီမ် ကြိမ် မို့ ..မေ အေး အ ရ သာ ထူး နေ ပုံ ရ ပါ တယ်..။ တ အင်း အင်း ဖြစ် နေ ပြီ...။စောက် ရေ တွေ လဲ တ အား ထွက် စို နေ တာ တွေ့ရ လို့မေ အေး စောက်ပတ် အ ကွဲ လေး ထဲ ကို ဒစ် ဖျား အ သာ တေ့လိုက် ပြီးဖြေး ဖြေး လေး ချော့သွင်း ကြည့်လိုက် ပါ တယ်...။“ အိုး....နာ နာ....နာ တယ်..ကို ကို.....“ဒစ် ကြီး မြုပ်ဝင် သွား တော့မေ အေး ကျ နော့်ရင် ဘတ် ကို တွန်း ထား ပြီး ပြော တယ်..။ကျ နော် လဲ သူ့ကို အာ ရုံ ပြောင်း အောင် နို့တွေ ကို စို့လိုက် နယ် လိုက်...လုပ်ပေး နေ ပြန် တယ်..။လီး ကို လဲ ဖြေး ဖြေး ချင်း ရှေ့တိုး အောက် ငင် က စား ပေး နေ တယ်..။းဒစ် ကြီး မြုပ် ရုံ က စား ပေး နေ တာ.....စောက် ရေ တွေ တ အားထွက် နေ တာ မို့တ ဖြေး ဖြေး ချင်း စမ်း သွင်း ပေး တာ တော် တော် ကြီး သွင်း လို့ရ လာ ပြီး မေ အေး လဲ အင်း အင်း နဲ့ညည်း နေ တာ ကောင်း နေ ပုံ ရတယ်..“ နာ သေး လား မေ အေး...“ “ဟင့်အင်း..““ကောင်း လား...“သိ ဘူး...““ ဒို့တော့သိပ် ကောင်း တာ ဘဲ..““ သွား..တော် တော့်ကို ကျွမ်း တယ်....လူလည် ကြီး....“တ ချက် ချင်း ဖြေး ဖြေး လိုး ပေး လိုက် ပါ တယ်..။လီး တန် ကြီး ထိုး သွင်း လိုက် တိုင်း..မေ အေး..ဖင် ကြီး တွေ..ကော့ကော့ သွား တယ်..။“ ကောင်း လား ဟင် မေ အေး....“ မေ အေး မ ဖြေ...မျက် စိ လေး မှေး ကာ ပါး စပ် လေး ဟ ပြီး လီး အ ရ သာ ကို ခံ နေ တယ်..။ မေ အေး ခံ နိုင် လာ တာ သိ ရတာ နဲ့ကျ နော် လဲ လိုး ချက် ကို မြန် ပေး လာ တယ်..။ ဖင် ကို ကော့ပြီး ညှောင့်ပေး တာ...မေ အေး ကြိုက် သွား တယ်...ကျ နော့်ကို တ အား ဖက် ပြီး...နမ်း နေတယ်..။အင်း...အင်း....ကောင်း လား ဟင်........အိ......အင်း...ကောင်း တယ်.......ကောင်း တယ်........ုကျ နော် လဲ ခပ် သွက် သွက် လိုး ပေး နေ ပြီ...။အ ပျို စင် စောက် ပတ် လေး က ကြပ် တင်း နေ တာ အ ရ သာ ကောင်း လွန်း နေ လို့အ ချက် ၃၀ လောက် လိုး ထဲ့ အ ပြီး မေ အေး ကျ နော့်ကို တင်း တင်း ဖက် ပြီး ကော့လိန် ပြီး..တ ဟင်း ဟင်း နဲ့ကာ မ စည်း စိမ် အ ထွပ် အ ထိပ် ရောက် ရှိ သွား တာ တွေ့ရ တာ ကြောင့် ကျ နော် လဲ အား ကုန် ကော့ဆောင့်ပြီး တ ကိုယ် လုံး ကျင် တက် သွား ရ လောက် အောင် ဘဲ ကောင်းတဲ့ပြီး ခြင်း ရ ရှိ သွား ရ တာ သုတ် တွေ မေ အေးစောက် ခေါင်း ထဲ ပန်း ထည့်လိုက် ပါ တော့တယ်...။ မေ အေး စောက် ဖုတ် ထဲ လီး တပ် ရက် နဲ့မေ အေး ကို ဖက် ရင်း လှဲ အိပ် လိုက် ပါ တယ်...။############################################################################################################################ မေ အေး လွင် လို ဖြူ ဖွေး တောင့်တင်း တဲ့အ ပျို စင် လေး ကို မ ထင် မှတ် ဘဲ လိုး လိုက် ရ လို့ ကျ နော် အရမ်း ကို ကျေနပ် နေ ပြီး မေ အေး လွင် ကို ဖက် ထား ရင်း မေ အေး လွင် ရဲ့ အ ၀တ် မဲ့ကိုယ် လုံး လေး ကို ကြည့်လို့မ ၀ ဖြစ် နေ တယ်..။ “ကို ကို....မေ အေး တုံးလုံး ကြီး လေ....ရှက် စ ရာ ကြီး...ထ မိန် ၀တ် ပါ ရ စေ...“မေ အေး လွင် က နို့ထွား ထွား တ စုံ ကို လက် နဲ့ယှက် ကာ ပြီး ပြော လိုက် ပေ မဲ့သူ မ ၇ဲ့ အ လှ အ ပတွေ ကို အ ရ သာ ခံ ကောင်း နေ တဲ့ကျ နော် က ဘယ် ခွင့်ပြု နိုင် ပါ့မ လဲ...။မေ အေး ရဲ့ ဖင် ကား ကား ကြီး တွေ ကို အား ရ ပါး ရ ဆုတ် နယ် ပြီး ၊ဖင် ကြား ထဲကိုစုံ ချီ ဆန် ချီ လက် နှစ် ချောင်း နဲ့ ပွတ် က လိ လိုက် ၊ဖင် စ အို ပေါက် လေး ကို ဖွ ဖွ လေး ပွတ် ပေး လိုက် လုပ်နေ တာ မေ အေး လဲ တ ဟင်း ဟင်း နဲ့ကာ မစိတ် တွေ ပြန် ကြွ လာ သ လို ကျနော့်ရဲ့လီး ချောင်း ကြီး ဟာ လဲ ဒု တိ ယ အ ကြိမ် လိုး ဖို့မတ် မတ် ကြီး တောင် လာ ပြန် ပြီ...။ကျ နော့်လီး တန် ကြီး က မေအေး ရဲ့ဖင် အိ အိ ကား ကား ကြီး တွေ ကြား ထဲ ကို ညှောင့်ပေး နေ တာ မေ အေး စောက် ပတ် ထဲ က ယို စီး ကျ လာ တဲ့စောက် ရေ တွေ ကြောင့်လျော က နဲလျော က နဲ ပွတ် ဆွဲ ပြီး..မေ အေး မှာ စိတ် တွေ ကြွ လာ ပုံနှင့် ...“ကို ကို...ထပ် ..ထပ် လုပ် အုံး မ လို့လား ဟင်..“လို့မေး ပါ တယ်...။ ကျ နော် လဲ မေ အေး ကို ဖင် ပူး တောင်း ထောင် ခိုင်း လိုက် တယ်..။မေ အေး က ရှက် တယ် လုပ် နေ လို့ ..သူ့ဖင် ကြီး တွေ ကို ဆွဲ မ ပြီး ထောင် ပေး လိုက် ရပြီး ကျ နော် လဲ ဖင် ကြီး တွေ ကို ဆုတ် ကိုင် ပြီး ဖင် ကြား တ လျောက် လျာ နဲ့အား ရ ပါး ရ ယက် ပါ တယ်..။စောက် ပတ် ကို လဲ ယက် ပေး တာ ပေါ့ ..။ဖင် ပေါက်ကို လျာ နဲ့ထိုး က လိ တော့မေ အေး ထွန့်ထွန့်လူး တော့တာ ဘဲ...။အာ..ရှီး..အာ ရှီး နဲ့ ....ဖင် ကြီး ယမ်း ခါ နေ တယ်..။ “ ကြိုက် လား ဟင် မေ အေး....““အင်း...အင်း...““ဘာ အင်း လဲ..““ကြိုက်.....တယ်...“ကျ နော် ဆက် ပြီး စောက် ပတ် ကို လျာ နဲ့ထိုး မွှေက လိ ပေး လိုက် တာ မေ အေး ကော့ပျံ နေ ပြီး.....လိုး လိုး...လိုး ပါ တော့ ...ကို ကို ..“ လို့တောင်း ဆို နေ ပါပြီ...။ ကျ နော့်လီး ကြီး လဲ မေ အေး လို ချော ချော အ ပျို မ လေး ၇ဲ့စောက် ပတ် လှ လှ ကြီး ကို ယက် နေ တာ မို့အ စွမ်း ကုန် တောင် .. ပြီး ဒစ် ကြီး က လဲ မှိုပွင့်ကြီး လို ကား ကား ကြီး နဲ့ဒု တိ ယ အ ကြီမ် လိုး ရန် အ ဆင် သင့်ပါ ဘဲ..။ “လိုး မယ်....မေ အေး ကို လိုး မယ် ...“နှစ် ယောက် လုံး သွေး တွေ တ အားဆူ...ပြီး နှုတ် မှ တ တွတ် တွတ် ပြော မိ နေ ကြ ပြီ...။ စောက် ပတ် ယက် တာ ကို ရပ် လိုက် ပြီး...မေ အေး ပေါင် တန် နှစ် ဖက် ကို ဆွဲ ကား လိုက် ပါ တယ်..။ “ဟင်း...ကောင်း လိုက် တဲ့စောက် ပတ်...“ မေ အေးရဲ့စောက် ပတ် ကို သေ သေ ခြာ ခြာ ကြည့်ပြီး...သ ဘော ကျ နေ မိ တယ်..။ “ကို့လီး ကို ကြိုက် လား ဟင်...“ 8 of 9
9. ကြိုက် တယ်....အ ရမ်း ဘဲ..အ ရမ်း ဘဲ..“ မေ အေး မှာ လီး ကြီး ကို မက် မောတဲ့မျက် လုံး တွေ နဲ့စိုက် ကြည့်နေ တယ်..။ ကျ နော် က မေ အေး စောက် ပတ်အ ကွဲ ကြောင်း အ တိုင်း လီး ဒစ် ဖျား နဲ့အ လျား လိုက် ပွတ် ဆွဲ ပေး နေ လိုက် တယ်... အင်...ဟင်...အင်.......ဘာ လုပ် နေ တာ လဲ......မေ အေး ကောင်း အောင်လုပ် ပေး နေ တာ လေ.....အိ......အ ထဲ...အ ထဲ....မ ထဲ့သေး ဘူး လား .....ဘာ ကို ထဲ့ရ မှာ လဲ......အို ကို ကို့လီး လေ.....လီး.....လီး ကြီး ပေါ့ .......တ တွတ်ုတွတ် နဲ့တောင်း ဆို နေ တယ်..။ ကျ နော် လဲ လီး ကို မေ အေး စောက် ပတ် ထဲ တေ့ပြီး သွင်း ကြည့်လိုက် ပါ တယ်..။ကျ နော့်ဒစ် လုံး ကား ကား ကြီး တင်း က နဲ..စောက် ပတ် နှတ် ခမ်းသား နု နု လေး ထဲ ညပ် တိုး ၀င် သွား တယ်..။အ သာလှုပ် ပြီး အ ၀င် အ ထွက် လုပ် ကြည့်တယ်..။ မေ အေး တ အီး အီး နဲ့အ သံ ထွက် နေ တယ်..။ “နာ လို့ လား..““ရ တယ်..ရ တယ်.....“ကျ နော် လဲ ဖြေး ဖြေး လေး မ သိ မ သာ နဲ့ ထိုး ပေး နေ တာ မ ကြာ ခင် ဘဲ..လီး တ ဆုံး တ ချက် ချင်း လိုး နိုင် လာ ပါ တယ်..။စောက်ပတ်က တင်း စီး ပြီး..လိုး ရ တဲ့အ ရ သာ ကကောင်း လွန်း နေ တယ်..။ ခပ် ဖြေး ဖြေး တ ချက် ချင်း လိုး ပေး တုံး မေ အေး ရဲ့နို့တွေ ကို တ လုံး ပြီး တ လုံး စို့ပေး လိုက် နယ် ပေး လိုက် လုပ် တယ်..။မေ အေး ခြေ ထောက်ကို ပူးပြီး အ ပေါ် ထောင် ပြီး ပြူး ထွက် နေ တဲ့စောက် ပတ် ကို ခပ် သွက် သွက် လေး ညှောင့်ပေး လိုက် ပြန် တော့မေ အေး လဲ တ အင့်အင့်နဲ့ဖင် တွေကိုကော့ကော့ ပြီး ပေး တယ် ဗျာ..။အ ချက်၃၀ လောက် လိုး ပေး အ ပြီး မေ အေး ကို ဖင် ထောင် ကုန်း ပေး ဖို့ပြော လိုက် ပါ တယ်..။မေ အေး က ကာ မ စိတ်တွေ ကြွ ပြီး ...ခံ ကောင်း နေ ချိန် ....လီး ကြီး အ လိုး ရပ် သွား တာ ကြောင့်ဆက် ခံ ချင် လှ တာ ကြောင့်အ မြန် ဘဲ လေး ဘက် ထောက် ကုန်း ပေး တယ်..။ ကျနော် က သူ့ခါး ကို နှိမ့်ကာဖင် ကြီး တွေ ကို ကော့ထောင် ဖို့အ နေ အ ထား ပြင် ပေး လိုက် ပြီး ဖင် ကား ကား ကြီး တွေ ကြား က ဖေါင်း ပြူး ထွက် နေ တဲ့ စောက် ပတ် ကြီး ကို အား ရ ပါး ရ ကြီး လိုး ပေး လိုက် ပါ တယ်..။တော် တော် ကြာ ကြာ အား ပါး တ ရ ဆောင့်ဆောင့်လိုး ပေး လိုက် တယ်..။ မေ အေး လဲ ပါးစပ် လေး ဟ ပြီး မျက် လုံး လေး မှေး စင်း ပြီး လိုး သ မျှ ခံ နေ တော့ကျ နော် လဲ ဖင် ကြီး တွေ ကို လက် ၀ါး နဲ့ဖျန်း က နဲ ဖျန်း က နဲ ရိုက် လိုက် မိ တယ်...။အာ့.....ကို ကို.....ဘာ လို့ရိုက် တာ လဲ...... “ ဖင် ကြီး တွေ က လှ လွန်း လို့ “...... .ခါး မှ ဆွဲ ကိုင် ပြီးအား ရ ပါး ရ လိုး ပြီ...။ မေ အေး လဲ ဖင် တွေ ကို ကျ နော် လို ချင် တဲ့အ တိုင်း ဖင် ကြီး တွေ ကို စ ကော ၀ိုင်း ဝေ့၀ိုက် ခါ ကော့ကော့ ပြီး ပေး နေ ပါ တယ်...။ထိ ထိ မိ မိ လိုး ကြ တာ.....ကျ နော် ရော မေ အေး ပါ ပြိုင် တူ တ ချိန် ထဲ ကောင်း သွား ( အ ထွတ် အ ထိတ် ) ကို ရောက် ရှိ သွား ကြ ပါတယ်..။ “ကို ကို ရယ်.....ကောင်း လိုက် တာ....“ အဲ ဒီ ည က ကျ နော် မေ အေး ကို ၅ ချီ လိုး ပေး ခဲ့ပါ တယ်...။ကျ နော် တို့၂ ဦး ဟာ ဆား ငံ ရေ ကို သောက် သုံး မိ တဲ့လူ တွေ ပါ...။သောက် ပြီး ရင်းသောက် ချင် ရင်း....ပေါ့ ..။နောက် တ နေ့မ နက်.....ကျ နော် အိပ် ရာ ထ နောက် ကျ ပါ တယ်..။ကျ နော် ထ မင်း စား ခန်း မှာ ကော် ဖီ သောက် နေ တုံး ဖုံး မြည်လာ တယ်..။ မ မ သက် ည နေ ပြန် ရောက် မယ်.....လာ ကြို ပါ....တဲ့ ....
Posted by zayar htut at Tuesday, May 13, 2014 19 comments: Links to this post
မမမူတစ်ယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲရေချိုးနေသည် ။အပျိုအရွယ်ကတည်းကအဲ့အတိုင်းပဲချိုးလာခဲ့တာအကျင့်ပါနေပြီ။ဆပ်ပြာတိုက်လျှင်လဲတစ်ကိုယ်
လုံးတိုက်မှအားရသည် ။ ဆပ်ပြာတိုက်နေစဉ် စောက်ဖုတ်တဝှိက်သို့ရောက်လာသောအခါ…“ဟင်း……ဟင်း……” “ ကောင်းလိုက်တာ ကိုမြငိ့ကလဲခရီးသွားတာကြာလိုက်တာ” ရင်လေးရှားပြီးမီးဖိုထဲဝင်သွားပြီးတော့ “ ဒီဟာလောက်ဆိုအာသာပြေမှာပါ” ခရမ်းခေါင်းသီးအရှည်တောင့်
၁ လက်မ ပတ်လည် 7လက်မလောက်ရှည်သည် ။
တစ်နေ့ ကိုမောင်တစ်ယောက်မမမူကိုအစမ်းသဘောအနေနဲ့ မမမူရဲ့လှကိုပေါ်တင်ကြည့်သည် ။ မမမူကလဲစိတ်မဆိုးရှက်သလိုဟန်ဆောင်ရင်း
ပြုံးပြီးတော့ပြန်ကြည့်သည် ။ တစ်ရက်မမမူကိုမောင်တို့အခန်းကိုဝင်လာသည် ။ ဘာအကြောင်းနဲ့ဝင်လာသည်တော့မသိ ကိုမောင်လဲစိတ်ပါလာတာနဲ့
ဖက်နမ်းပစ်လိုက်သည် ။ မမမူမအော်ဘဲလှည့်ပြီးပြန်ပြေးသွားပြီး အခန်းအဝအရောက်တွင် ကိုမောင့်ကိုပြန်ပြီး လှည့်ကြည့်သွားသည် ။ သူ့အကြည့်တွင်
စိတ်ဆိုးဟန်လုံးဝမပါပေ ။ ဒါကိုသိသောကိုမောင်ကတော့အဓိပါယ်အပြည့်နှင့်…… တစ်နေ့ မမမူအခန်းအပြင်သို့အထွက် ကိုမောင့်မိန်းမဖြူမာနှင့်ဆုံသည်
ဖြူမာက “မမ ဖြူမာ့အမေဆီသွားရမယ် အဲ့တာ မမဆီကိုသော့အပ်သွားချင်လို့ အဲ့တာကိုမောင်လာရင်ပေး ပေးပါနော်မမ ” “အေးပါညီမလေးရယ်ပေးလိုက်မယ်လေ ” “ကျေးဇူးပဲမမ ကိုမောင်လာရင်အကြိုးအကြောင်းပြောပြပေးပါနော်မမ ” “အေးအေး ညီမ ကားမမှီပဲနေဦးမယ်”
“ဟုတ်မမ သွားပြီနော် ”
နေ့လည်ခင်းအရောက်တွင် ကိုမောင်တစ်ယောက် အလုပ်မှပြန်လာသည် ။ “ဟင် တံခါးကြီးပိတ်ထားပါ့လား ဖြူမာဘယ်သွားလဲမသိဘူး ” “မမမူ ရေ
ဖြူမာဘယ်သွားမယ်လို့မမကိုပြောခဲ့လဲ ဟင်” “အော် ကိုမောင်တောင်ပြန်ရောက်နေပြီပဲ ဝင်ခဲ့ဦးလေ ” ပြောပြီးလှည့်ထွက်သွားရာ မမမူ၏ ဖင်ကြီးအား
ကြည့်မိသောအခါ “ဟင်ဆောကြီးအရည်တွေရွဲနေပါ့လား” အရင်ကအစရှိထားသောကြောင့် အခန်းထဲသို့ရောက်ရောက်ချင်း မမမူကိုအနောက်မှ သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး မမမူ၏နို့ကြီးများအား ညှစ်လိုက်သည်နှင့် “အာ..ကိုမောင်ဘာလုပ်တာလဲကွာလွှက်ပါ မလုပ်ပါနဲ့ ” “မမမူကလဲ ခဏလောက်ပါနော်
လုပ်ပါမမမူ” မူမူလဲဘာမှမပြောတော့ဘဲငြိမ်နေသည် ။ ဒီတော့ကိုမောင်လဲအတင့်ရဲလာပြီး မမမူ၏ဖင်ကြီးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်အသာပွတ်းပေးနေပြီး
ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလဲနို့အုံကြီးမှားကိုအားရပါရကိုင်နေသည် ။ မမမူတစ်ယောက်မနေနိုင်တော့ပါ နှုတ်မှ တဟင်းဟင်းနှင်ညည်းလာသည် ။ ဒါကို
ကိုမောင်တစ်ယောက်အခွင့်ကောင်းယူပြီး မူမူ၏ ဘရာစီယာအတွင်းသို့ နှိုက်သောအခါ မူမူက မလုပ်ပါနဲ့လို့ ပါးစပ်မှပြောပြီးအားမပါသောလက်ဖြင့်
ဖယ်ထုတ်နေသည် ။“ မမမူအခန်းထဲသွားအောင်လေ..နော်” “ဟာကိုမောင်လဲ မမမူအဲ့လောက်မရဲဘူးကွာ ” “လာပါမမရယ်” ဟုပြောပြီးဆွဲခေါ်သောအခါ မမမူကလဲအလိုက်သင့်ပါလာသည်။
အခန်းထဲရောက်သောအခါကိုမောင်က မမမူ၏အင်္ကျီကိုပင့်တင်ပြီး နို့တွေကိုအားရပါးရစို့လေတော့သည်းထိုအခါမမမူကလဲ “ ဟင်း….ဟင်း….အား..ကိုမောင်ရယ်ကောင်းလိုက်တာ…အရမ်း
ကောင်းတာပဲ … ” မမမူ၏နို့တွေကိုစို့နေရင်းလက်တစ်ဖက်မှလဲ လုံချည်အပေါ်မှ အဖုတ်ကလေးအားပွတ်လိုက် ညစ်လိုက်နှင့် ဖီးတတ်အောင်အမျိုးမျိုးလုပ်နေသောအခါ မမမူတစ်ယောက်
အရည်တွေရွှဲလာကာလုံချည်တစ်ခုလုံး အကွက်လိုက်စိုနေတော့သည် ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုမောင်တစ်ယောက်လုံချည်အတွင်းသို့နှိုက်ခါ ပွတ်ပေးသောအခါမမမူတစ်ယောက်ကော့တတ်လာပြီး
နှုတ်မှညည်းသံတွေ ဆူညံလာတော့သည် ။ ခဏကြာသောအခါကိုမောငိက “မမမူခုတင်ပေါ်သွားရအောင်နော်” “ဟင့်အင်း အဲ့တာတော့မရဘူးကွာ ကိုမြင့်အပေါ်သစ်စါမဖောက်ချင်ဘူး ”
“အာ မမကလဲ တစ်ခါတည်းကို သူသိတာမှတ်လို့ ” ဟုပြောပြီး မမမူ၏စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းသွင်းလိုက်ခါ ” ဇွတ်ဇွတ်…ဖွတ်ဖွတ် …” လက်စွမ်းပြပါတော့သည်။ ဒီတစ်ခါတော့မမမူ
ငြင်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ ။ ကိုမြင့်ကိုတအားကြုံးဖက်ခါ “အား…..ကိုမောင်….အား….တော်ပါတော့ကွယ်…. မမမူမငြင်းနိုင်တော့ပါဘူး” ဟုပြောပြီးကိုမောင့်အားတွန်းလွှတ်လိုက်သည် ၊ထိုအခါကိုမောင်ကလဲ
သူ၏အင်္ကျီကိုအမြန်ချွတ်ပြီး ပုဆိုးကိုဖြေချလိုက်သောအခါမှာတော့…မမမူတစ်ယောက်ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် မျက်လုံးကလေးများဝိုင်းသွားပါတော့သည် ။“ ကြီးလိုက်တဲ့လီး ကိုမြင့်နှစ်ဆ လောက်ရှိတယ်”
ဟုတွေးမိပြီး ကြောင်တောင်တောင် ရပ်ကြည့်နေမိပါတော့သည် ။ လီးနှင့်ပြတ်နေတာတစ်လကျော်လောက်ရှိနေတော့ မမမူတစ်ယောက်မနေနိုင်အောင်သူမ၏စောက်ပတ်ကလေးမှာယားတတ်လာပါတော့
သည် ။ “မမမူဘာလုပ်နေတာလဲ အဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်တော့လေ” ဟုပြောလိုက်ရာ မမမူတစ်ယောက်သေနတ်နှင်ချိန်ပြီးခိုင်းစေခံရသူလို သူမ၏အဝတ်အစားများကိုချွတ်ချလိုက်သောအခါ မမမူ၏
မိမွေးဖမွေးအလှများထွက်ပေါ်လာလေသည် ။ ကိုမောင်တစ်ယောက်မမမူ၏အနားသို့ကပ်ပြီးဖက်လိုက်သောအခါသူ၏လီးနှင်မမမူ၏အဖုတ်ကိုထောက်မိသောအခါ မမမူကလီးကြီးက်ုကိုင်ပြီး ကွင်းတိုက်ပေး
ပါတော့သည် ။ ထိုအခါကိုမောင်က “မမမူ ကုတင်ပေါ်တတ်လိုက်တော့လေ နော် ” “အင်း” ဟုပြောပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ခြေထောက်တစ်ဖက်လှမ်းလိုက်သောအခါ ကိုမောင်က အနောက်မှမမမူ၏ခါးကိုကိုင်ပြီး
စောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့လိုက်သောအခါ “ မင်းကလဲ ကြံ င်္ကြ ဖန်ဖန်ကွယ် အား………” ကိုမောင်တစ်ယောက်အနောက်မှစောင့်သွင်းလိုက်သည် ။ ယောက်ျားရှိတဲ့မမမူတောင် အံတင်းကာလက်ကလဲ
အိပ်ယာခင်းကိုတင်းနေအောင်ဆုတ်ကိုင်လိုက်ရသည် ။ “မမမူ အရမ်းနာသွားလားဟင် ” “ မင်းကလဲမပြောမဆိုနဲ့တအားလုပ်တာကိုနာတာပေါ့ ” “နောက်ဆိုပြောပြောဆိုဆိုလုပ်ပါ့မယ်နော် ”
ဟုပြောပြီးလီးတံကြီးကိုတစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက်ထုတ်ပြီးစတင်တင်လိုးပါတော့သည် ။ “ ဟင်းဟင်း…ကောင်းလိုက်တာ …ဆောင့်ဆောင့် ကိုမောင် ” “ ဖွတ်...ဖွတ်….ပလွတ်…အား…
မင်းလီးကိုအသာလေးတေ့ထားဦး ”ဟုပြောပြီး ဒူးတစ်ဖက်ထောင်ထားကာ ကားကားလေးဖြစ်နေသော ပေါင်တုံစေ့လိုက်ပြီး “ ရပြီ ကိုမောင်ဆောင့်တော့ ” “ွေတ်….ပလွှတ်….ဇွတ်….အား”
အချက်ငါးဆယ်လောက်ဆောင့်ပြီးသောအခါ ကိုမောင်တစ်ယောက်ဖီးတတ်လာကာ အနောက်မှ တအားကြုံးဆောင့်ပါတော့သည် ။ “အား….ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် … ဆောင့်ဆောင့်
နာနာလေး မမကိုမညှာနဲ့ အား..ဖွတ်ဖွတ် ….ပလွတ်….ဟင်း….ဟင်း….ကောင်းလိုက်တာ အား….မမပြီးတော့မယ်မောင်…ကပ်ဆောင့်တော့ ” အထာနပ်သောကိုမောင်ကလဲ ခါးအားလေးနှင့်ပဲ
ကပ်လိုးခါ “မမကောင်းလားဟင် ” အင်း..မောင်အရမ်းကောင်းတယ်…ဆောင့်…ဆောင့် …အား….အား….ထွက်ကုန်ပြီ အား…. ” ကိုမောင်ကလဲ လီးကြီးကိုကပ်သွာင်းပြီးနှုတ်မှ တဟင်းဟင်းနှင့်
ကာမပန်းတိုင်သို့တတ်လှမ်းကာ လရေများကိုမမမူ၏ဆောက်ခေါင်းထဲသို့တရှိန်ထိုးပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့သည် ။ “အရမ်းချစ်သွားပြီမမရယ်…” “မမလဲမောင့်ကိုအရမ်းချစ်သွားပြီ…” ထပ်လျှက်သား
ကနေ လီးကြီးကိုစောက်ဖုတ်ထဲမှချွတ်လိုက်သောပြီး မမမူ၏လုံချည်ကိုကောက်ယူကာ သူ၏လီးကိုသုတ်နေပြီး “ မမ ပေါင်ကားထားပေးလေ…မောင်သုတ်ပေးမယ် ” “ ဟင်ကိုမောင်ကလဲ ရှက်စရာကြီး
မမပဲသုတ်လိုက်ပါ့မယ် ” “ မမကလဲအစောကခေါ်သိုခေါ်လေ” “ ဘယ်လိုခေါ်လိုက်လို့လဲ ” “မမနော် မသိချင်ယောင်မဆောင်နဲ့ နော် မောင်အသဲယားလာရင် ” “ဟိုးဟိုးဆရာ ခေါ်ပါ့မယ် ”
“ မမအဖုတ်လေးက အတော်လှတာပဲ မောင်တော့အရမ်းချစ်မိသွားပြီ စွဲသွားပြီ မရယ်…” “ ဟွန်းသူများစွဲဖို့လဲထားပါဦး သူ့မိန်းမပြန်လာရင်မေ့သွားမဲ့သူကများ အပိုတွေပြောနေတယ် ”ဟု ညုတုတုအသံလေးနဲ့ပြောသောအခါ ကိုမောင်က “မရယ် ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူကိုမေ့စရာလား ” ပြောပြောဆိုဆိုနှင့်မမမူ၏အဖုတ်ကလေးကိုတယုတရ သုတ်ပေးသောအခါ မမမူမှာ
ကြည်နူးပီတိဖြစ်မိပြန်သည် ။ သူမ၏ယောက်ျားတောင် အဲ့သလိုတစ်ခါမှမလုပ်ပေးဖူးပါ ။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရလျှင် သူမကိုမောင့်ကိုချစ်မိနေတာ အတော်ကြာနေပြီ ။ အရင်ကကိုမောင်ရေချိုးနေရင်း
ဖြူမာအမှတ်နှင့်မပြောမဆို ချောင်းကြည့်မိရာ မြင်လိုက်ရသော ကို့မောင်လီးကိုမှန်းပြီး ကြားတိုက်ခဲ့ရတဲ့အခါတွေမနဲတော့ဘူးလေ။ မမမူ၏စောက်ဖုတ်းကိုသုတ်ပြီးသောအခါ ကိုမောင်မမမူ၏ဘေးမှာဝင်
ပြီးလှဲနေလိုက်သည် ။ တစ်ချီပြီးသွားတာတောင် အတောင်မပျက်သော ကိုမောင့်လီးကြီးကိုကြည့်ကာ “ ဟင်မောင့်လီးကလဲတောင်နိုင်လွန်းလိုက်တာ မတ်နေတာပဲ မဝသေးလို့လားဟင် ” “ အင်းမမ
ဝသေးဘူး မမမောင့်ကိုမှုတ်ပေးပါလားဟင် ” “ဟင့်အင်း မှုတ်ချင်ဘူး မမ ကွင်းတိုက်ပေးမယ်လေ နော် မောင်… စိတ်မဆိုးနဲ့နော် .. ” “အင်းလေ မမ မလုပ်ပေးချင်လဲရပါတယ် ” “မောင်ကလဲ အဲ့လိုတော့
မပြောပါနဲ့ ” ဟုပြောပြီးကိုမောင့်လီးကြီးကိုကိုင်ကာ စတင်ကွင်းတိုက်ပေးပါတော့သည် ။ ခဏကြာတော့ကိုမောင်ကအိပ်နေရာမှ ခေါင်းထောင်ပြီးတော့ မမမူ၏နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းလိုက်သည် ။ မမမူကလဲအားကျမခံပြန်နမ်းရင်း တဖြည်းဖြည်းဖီးတတ်လာသည် ။ ကိုမောင့်၏လက်များကလဲ မမမူရဲ့အဖုတ်လေးပေါ်သို့ရောက်နေပြီး စောက်ဖုတ်ကြားတစ်လျှောက်ပွတ်ပေးနေသည် ။ ခဏအကြာ
တွင် မမမူ၏နှုတ်ဖျားမှလဲ တဟင်းဟင်းနှင့် တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကိုမောင်ကလဲ စောက်စိလေး ကိုလက်မထိပ်ကလေးနှင့်ဆွကာ လက်ခလည်နှင့် စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပေးနေသည် ။
မမမူတစ်ယောက်မနေနိုင်တော့သောအခါ “ မောင်လုပ်စရာရှိတာလုပ်တော့လေ ” “ဟင်မမ မောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲ ပြောပြလေ ” “ ဟာ .. မောင်ကလဲဟိုဟာကိုပြောတာလေ ” “ဟင်..မမဘာလဲလို့
မောင်ကရှင်းရှင်းပြောမှနားလည်တာလို့ ” “မောင်ကလဲ သိရဲ့သားနဲ့ကွာ ” “ မသိလို့မေးတာပါမမရယ် ” “ မမ စောက်ဖုတ်ကိုမောင့်ရဲ့လီးကြီးနဲ့လိုးဖို့ပြောနေတာ ကဲရှင်းပြီလား ” “ ဟုတ်ရှင်းသွားပြီ
ဒါပေမယ့်မမခံနိုင်အောင်ခံနော် အစောကထက်မောင်ပိုကြမ်းတော့မှာနော် ပြီးမှ နာလှပါချီရဲ့ဆိုပြီးမငိုနဲ့နော် ” ကျွဲမြီးတိုသွားသော မမမူကလဲ အားကျမခံ “ အောင်မှာ မောင်ကြိုက်သလောက်လိုး
ကြိုက်သလို လိုး မမခံနိုင်အောင်ခံမယ် ” “အဲ့တာမှကြိုက်တာ မမ စပြီနော် ” ဟုပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ကိုမောင်တစ်ယောက်မူမူ၏စောက်ပတ်ဝကိုတေ့ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့လီးကြီးကိုစတင်သွင်းပါတော့သည်။
မမမူလဲ သူ့စကားနှင့်သူမို့ ညည်းသံမထွက်မိအောင်အံကြိတ်ခံရရှာပါသည် ။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…ဖွတ် … ဖွတ်...” နောက်ဆုံးတွင် မမမူလဲမခံတော့ဘဲ ” ဟင်း…” ဟုသက်ပြင်းချမိပါတော့သည် ။ “ ပလွတ် .. ဖွတ်..
ဗြစ်… အား… ဟင်း… ကောင်းလိုက်…တာ…မောင်ရယ်…အား..ဇွတ် .. ဖွတ် .. ဟင်းဟင်း…နာနာလေးဆောင့် မောင် ..မမအရမ်းကောင်းနေပြီ…” “ဟင်း အရမ်းကောင်းတာပဲမရယ် … မမ အပေါ်ကနေပေးလေ…” “မောင်ညောင်းနေပြီလား..အင်းမမအပေါ်ကနေပေးမယ်…” မမမူကုန်းထပြီး ကိုမောင့်လီးကြီးပေါ်သို့ ခွခါ ဆောင့်ပါတော့သည် ။ “အား…မမ ကောင်း…တယ် ဖတ် ..ဖတ်
ပလွတ်…ပလွတ် .. မမ မြန်မြန်လေးဆောင့် မောင်ပြီးတော့မယ်..” “မမလဲ ပြီးတော့မယ် မောင် ..” “ အား…………….” ဟုအော်ပြီး နှစ်ယောက်သား ဒုတိယ အကြိမ် ပြီးသွားပါတော့သည် ။ “ ကောင်းလိုက်တာမမရယ် ” “ အင်း… မမလဲအရမ်းကောင်းတာပဲ …မောင် ”
ဒီလိုနှင့် နှစ်ယောက်သား လိုးနေကြတာ တစ်နေကုန်ပါပဲ ။ ဘယ်နှစ်ချီ ပြီးလို့ပြီး မှန်းတောင် ရေလို့မရနိုင်အောင်ပါပဲ…..
ဖြူမာနှင့်ကိုမြင့်ပြန်မလာ မချင်းလဲ လိုးနေကြဦးမှာပါပဲ ။
ဖုန်းခေါ်မယ် မက်ဆေ့ ပို့မယ် အင်တာနတ် မလို ဖုန်းပို...
ကိုကို နီနီ (အော်စာအုပ်)